गन्तब्य नेपाल न्युज :: बिजनेस
शेयर बजारमा ५४ अंकको सुधार
बढ्यो सुन–चाँदीको मूल्य
६३ अंकले बढ्यो नेप्से परिसूचक
२६ सयबाट तल झ¥यो नेप्से परिसूचक
साहस ऊर्जाको आईपिओ आजदेखी बजारमा
काठमाडौं । सरकारले भन्सार सहुलियतको ३० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्ने भएको छ । ठूला चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै ३० हजार मेट्रिकटन चिनी खरिदको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थको सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर साल्ट ट्रेडिङ वा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयातको अनुमति दिइने मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । बजारमा प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँसम्ममा चिनी बिक्री भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजार भाउ नियन्त्रणमा राख्न र मुख्य चाडपर्वमा हुने अभाव रोक्न सहुलियतको चिनी खरिद गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले सहुलियतको ३० हजार मेट्रिकटन चिनी खरिद गरेको थियो । तर, निजी चिनी उत्पादकले भने यो वर्ष चिनीको उत्पादन राम्रो हुने भएकाले आयात जरुरी नभएको बताएका छन् ।
नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घट्यो
झिनो अंकले बढ्यो नेप्से परिसूचक
सुनको भाउ तोलामा पाँच सयले सस्तियो
अब फोहोरको व्यवस्थापन होइन उद्योग नै चलाउनुपर्छ ः सांसद श्रेष्ठ
काठमाडौं, १ चैत । प्रतिनिधि सभा सांसद जीवन राम श्रेष्ठले फोहोरको ब्यवस्थापन मात्र भन्दा पनि अब यसलाइ उधोगकै रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । शनिवार कान्तिपुर सिसडोल वातावरण सेवा प्रालिको बार्षिक साधारणसभा तथा बनभोज कार्यक्रममा उनले विकसित देशहरुले फोहोरबाट उर्जा र मल उत्पादन गरिरहेको भन्दै उनले नेपालले पनि त्यसको सिको गर्नुपर्ने बताएका हुन ।
यस्तै कार्यक्रममा पुर्बगृह राज्यमन्त्री एबम् प्रतिनिधि सभा सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठ फोहोर ब्यवस्थापनमा कम्पनीले गरेको कामको प्रशम्सा गर्दै सेवालाइ थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए ।
कान्तिपुर सिसडोल वातावरण सेवा प्रालिका अध्यक्ष रमेश नेवाले फोहोर ब्यवस्थापनमा राज्यले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर ब्यवस्थापन केन्द्र सिसडोलमा बेला–बेला हुने विवादले समस्या हुने गरेको भन्दै राज्यले तत्काल बैकल्पिक केन्द्रको विकास गर्नु उनको सुझाव छ ।
कम्पनीले झन्डै दुई दशकदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं १३,१४ र १५ मा फोहोर ब्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा उपत्यकाको विभिन्न वडा सहित र उपत्यका बाहिर पनि आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्ने योजनामा रहेको अध्यक्ष नेवाले जानकारी दिए ।
सुनको भाउ तोलामा ९ सय रुपैयाँ सस्तो
आईतबार सेयर बजारमा ७९.७४ अंकको गिरावट
२ घण्टामै सेयर बजार ५८ अंकले घट्यो
महिला लघुबित्तको आईपिओ बाँडफाँड, ३७ हजार ५ सयले हात पारे
नेप्से परिसूचक १६ अंकले घट्यो, बैंकमा लगानीकर्ताको आकर्षण कायमै
प्रतितोला १५ सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको भाउ
नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च, बैंकमा ‘सिफ्ट’ हुँदै लगानीकर्ता
सर्वोच्चलाई भवन निर्माणको ठेक्काकाे म्याद थप गर्न महासंघको आग्रह
काठमाडौं, २१ माघ । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले पुनः आग्रह गरेका छन् । कोभिड–१९ को कारण कम्पनी नविकरणदेखि बैंक ग्यारेन्टी बनाउँन समय लागेकाले कयौं कम्पनीहरुले टेन्डर सहभागि हुन नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन ।
उसो त नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि यसअघि नै पत्राचार गरि सर्वोच्चलाई टेन्डरको म्याद थप गर्न आग्रह गरिसकेको छ । महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४क) मा भएको व्यवस्था अनुसार भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानको २१ दिन समय थप गर्न माग गर्दै माघ ५ गते सर्वोच्चलाई पत्र बुझाएको छ ।
तर सर्वोच्चले गत माघ ७ गते नै बोलपत्रमा निवेदन लिन बन्द गरेको छ । गत पुस ६ गते नयाँ भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सर्वोच्चले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीको लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरेको भएपनि कालिका समानान्तर जेभी, ओआशिष प्यासिफिक जेभी, भ्याल्ली कन्ट्रक्सन जेभी र हनुमान क्न्स्ट्रक्सन जेभी गरी चार वटा कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा निवेदन दिएका छन् ।
दर्जनौ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा राज्य कोषको करोडौ रकम बचत हुने भन्दै व्यवसायीहरुले म्याद थप गरि राज्य कोषको रकम बचत गर्ने तिर ध्यान दिन सर्वोच्चलाई आग्रह गरेका छन् । अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिने निकायले व्यवसायीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले बताए । सर्वोच्चले निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गर्न नहुने पनि उनको माग छ । म्याद थप गर्दा राज्य कोषको करोडौ रकम बच्ने र धेरै कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धा गर्दा काम समेत गुणस्तरीय हुने तर्फ ध्यान दिन उनको आग्रह छ ।
उसो त टेन्डर खोल्नु भन्दा २ हप्ता अघि प्रिविटिङ मिटिङ गर्नुपर्ने भएपनि ३ दिन अघि मात्र मिडिङ गरेकाले पनि म्याद थप अनिवार्य भएको उनीहरुको तर्क छ ।
शुक्रबारसम्ममा चन्द्रागिरीको आईपिओ सुचिकरण हुने, कति हुन्छ पहिलो मुल्य ?
निफ्राको आईपीओ बाँडफाँट, तपाईको भागमा कति पर्यो ?
उद्योग बाणिज्य महासंघमा कसले जिते, कसले हारे ?
कात्तिकमा २ हजार ९ जना पर्यटक नेपाल आए
काठमाडौं, ५ मंसिर । नेपालमा लकडाउन शुरु भएयता कात्तिकमा सर्वाधिक संख्यामा पर्यटक भित्रिएका छन् । नेपाल अध्यागमन विभागका अनुसार कात्तिक महिनामा २ हजार ९ जना विदेशी नागरिक नेपाल आएका छन् ।
एक महिनामा १३ सय ७० जना पुरुष र ६ सय ३९ जना महिला पर्यटक नेपाल आएका छन् । सरकारले १७ अक्टोवरबाट पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणमा आउन खुला गरेको थियो ।
त्यसअगाडी नै पर्वतारोहण र पदयात्रामा आउने पर्यटकलाई संस्थागत रुपमा सिफारिस लिई नेपाल आउने ढोका खुलेको थियो । यसले क्रमशः पर्यटक आगमन बढ्दै गएको छ । एक महिनामा अमेरिकाबाट मात्र ४ सय ५५ र बेलायतबाट ३ सय २६ जना नेपाल आएका छन् । यस्तै चीनबाट १ सय ६१, भारतबाट १ सय २५, टर्कीबाट ८२ र रुसबाट ८१ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् ।
महासंघमा सहमतिको प्रयास जारी छ ः गोल्छा
काठमाडौं, १९ कात्तिक । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासंघमा सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत महासंघको निर्वाचनमा सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताएका हुन्।
“प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चुनाव नै सर्वोत्तम तरिका हो,” भावी अध्यक्षसमेत रहेका उनले लेखेका छन्, “तर, अहिलेको विषम परिस्थितिमा महासंघमा कुनै सहमति भएमा यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको लागि सुखद् हुने थियो।”
उनले सहमतिको प्रयास जारी राख्न सबैमा अनुरोधसमेत गरेका छन्।
चीनले राष्ट्रीय सुरक्षामा खतरा पुगेको भन्दै हुवावे र जेटिई माथि प्रतिबन्ध
रसुवागढी नाकाबाट बुधबारदेखि सामान ल्याउन थालियो
काठमाडौं, ८ असोज । विगत तीनसातादेखि बन्द रसुवागढी नाका बुधवारबाट सुचारु भएको छ । चिनियाँ पक्षले नियमित सामान पठाउन थालेपछि नाका सञ्चालनमा आएको हो ।
रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवालाई चिनियाँ पक्षले बिहीवारदेखि दैनिक पाँचवटा कन्टेनरमा सामान पठाउने जानकारी दिएको बताए । उनका अनुसार बुधवार मात्र एउटा कन्टेनरमा स्वास्थ्य सामग्री आएको थियो ।
कोरोना महामारीका कारण माघ १५ गतेदेखि ठप्प रहेको नाका जेठ महिनामा सञ्चालनमा आएको थियो । तर, श्रमिकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि भदौको दोस्रो हप्ता यो नाका पुनः बन्द भएको थियो ।
जेठयता चीनबाट दैनिक चार कन्टेनर सामान आउने गरेको थियो । सामान आयातमा वृद्धि गर्न नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई पटकपटक अनुरोध गर्दै आएको छ । गतवर्ष सोही नाका हुँदै २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको समान नेपाल भित्रिएको थियो ।
काठमाडौं, २ असोज । भन्सार विभागबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को पहिलो दुई महिनामा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । विभागका अनुसार साउनको तुलनामा भदौमा राजस्व असुली केही वृद्धि भएको छ ।
साउनसम्मको असुली २२ अर्ब ८४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । भदौमा २४ अर्ब ९८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
विभागले भदौसम्म २२ अर्ब ३१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन गरेको छ । भन्सारले मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ १९ अर्ब १५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । अन्तःशूल्कमा भने संकलन ४ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । सडक सुधार शूल्कतर्फ ५० करोड ७७ लाख र सडक निर्माण दस्तुर ९२ करोड १ लाख रुपैयाँ संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ ।
काठमाडौं, ३१ भदौ । सरकारले नयाँ नक्सा राखी एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँको सिक्का निष्कासन गर्न राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ ।
नयाँ नक्सा राखेर सिक्का निष्कासन गर्नका केन्द्रीय बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । यसअघिका नोट र सिक्काहरुमा पुरानो नक्सा छन् ।
सरकारको अनुमति पाएसँगै अब राष्ट्र बैंकले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सासहितको सिक्का गर्ने छ।
अध्यागमनको बन्द सेवा पुनः शुरु
काठमाडौं, २९ भदौ । अध्यागमन विभागबाट विदेशी नागरिकलाई दिइँदै आएको राहदानीसम्बन्धी सेवा एक महिनापछि पुनः सञ्चालन भएको छ । विभागमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै गत साउन २६ गतेदेखि बन्द भएको सेवा हिजो (आइतबार) बाट पुनः शुरु भएको हो ।
विभागले गत चैत ८ गतेसम्म राहदानी नियमित भएका विदेशी पर्यटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु भएको मितिले १५ दिनभित्र स्वदेश फर्कने भएमा निःशुल्क राहदानी प्रदान गर्ने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय र सिमानाका अध्यागमन कार्यालयबाट निःशुल्क राहदानी नियमित गरी प्रस्थान गराइने विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चैत ८ गतेसम्म पर्यटक राहदानी नियमित भएका तथा विभिन्न कारणले उडान सञ्चालन भए तापनि आफ्नो मुलुक फिर्ता हुन सक्ने विदेशी मङ्सिर मसान्तसम्म नियमानुसार राहदानी शुल्क लिएर पर्यटक राहदानी नियमित गर्ने तयारी भएको छ ।
डेन्टल एसोसिएसनमा आवद्ध संस्थाले विनाधितो १५ लाखसम्मको कर्जा सुविधा पाउने
काठमाडौं, २५ भदौ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले नेपाल डेन्टल एसोसिएसनसँग बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउनसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौताअनुसार डेन्टल एसोसिएसनसँग आवद्ध सदस्य तथा त्यहाँ आवद्ध संस्थाका कर्मचारीहरूलाई बैंकले विभिन्न बैंकिङ सेवाका साथै विनाधितो १५ लाख रुपैयाँसम्मको प्रोफेसनल कर्जा सुविधा पाउने छन् ।
सहमतिपत्रमा बैंकका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ र नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. प्रविन्द्र अधिकारले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो कर्जाअन्तर्गत कर्जावालालाई १ लाख रुपैयाँसम्मको कोभिड–१९ इन्स्योरेन्स निःशुल्क प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ। सांग्रिला डेभलपमेन्टका विभिन्न शाखाहरूबाट यो सेवा उपयोग गर्न सकिने छ ।
मल आयातको ठेक्का पाएर पनि नल्याउनेलाई कारबाही !
काठमाडौं, २१ भदौ । मल आयातको ठेक्का लिएर तोकिएको समयसम्म पनि नल्याएका दुई ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही हुने भएको छ । गत पुसमा ठेक्का लिएर भदौ २० सम्म मल ल्याउने गरी सम्झौता गरेका शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र होविको मल्टीपल कम्पनीलाई कारबाही गर्न लागिएको हो ।
उक्त बैठकले दुवै ठेकेदारको धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने विषयमा छलफल भइरहको स्रोतले जानकारी दियो । सम्झौता गरेर पनि मल नल्याएका ती ठेकदार कम्पनीको धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
संस्थानले गत पुसमा वर्षायामको मल आपूर्तिका लागि शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र होमनाथ कोइरालाको होविको मल्टीपल कम्पनीलाई ठेक्का थिएको थियो । तर, तोकिएको समयसम्म पनि मल नल्याएपछि उनीहरुलाई कारबाही गर्न लागिएको हो ।
सरकारले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि किसानले मल पाएका छैनन् । देशभर यो सिजनका लागि १ लाख ५० हजार मल आवश्यक पर्ने भए पनि अहिले कत्ति पनि मल सरकारसँग छैन ।
पुनर्कर्जा लिन व्यवसायीलाई बैंकहरुको सार्वजनिक आह्वान
काठमाडौं, १२ भदौ । बैंकहरुले पुनर्कर्जा लागि आसय माग गर्न थालेका छन्। बैंकहरूले यस्तो कर्जा लिनका लागि सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरिरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पुनर्कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउँदै महामारीबाट पीडित व्यवसायीलाई यस्तो कर्जाको व्यवस्था गरेको हो । कर्जा दिन बैंकहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक योग्यता पुगेकाहरूले कर्जाका लागि बैंकमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेका छन् ।
सानिमा, सनराइज, सिद्धार्थ बैंकलगायतकाले निश्चित समय तालिका दिएर आफूले सुविधा लिएको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् चालु आर्थिक वर्षका लागि पुनर्कर्जा कोषको रकम १ खर्ब बनाएको छ। एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनर्कर्जा लिइसकेपछि फेरि अर्को संस्थाबाट यस्तो कर्जा लिन पाइँदैन।
इपानमा आचार्यको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं, १ भदौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) मा कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । आइतबार साँझ अबेर सम्पन्न इपानको भेलाले आचार्यलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको हो ।
वाम र प्रजातान्त्रिक प्यानलबीच निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने रस्साकस्सीका बीच इपानमा आचार्यका नाममा सर्वसम्मति जुटेको हो ।
यसअघि इपानको कार्यसमिति ९ सदस्यीय रहेकामा विधान संशोधन गरी १६ सदस्यीय बनाइएको छ । समितिका तीन उपाध्यक्षमा क्रमशः आशिष गर्ग, गणेश कार्की र मोहन डाँगी चयन भए ।
यस्तै महासचिवमा गोरे शेर्पा, सचिवमा भरत खत्री, बलराम खतिवडा र राम आचार्य तथा कोषाध्यक्षमा आनन्द चौधरी छानिएका छन् । कार्यसमिति सदस्यहरुमा प्रकाश दुलाल, भरत खड्का, भरत लामिछाने र उत्तम ब्लोन तथा महिला सदस्यमा अविज्ञा मल्ल र कविता कँडेल सर्वसम्मत चयन भएको इपानले जनाएको छ । बाँकी दुई सदस्य कार्यसमितिले पछि मनोनयन गर्नेछ ।
काठमाडौं, २१ साउन । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएको छ । गत सोमबार एनसेललाई कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयले नाम परिवर्तन गरेर पब्लिक कम्पनीको रुपमा कारोबार गर्ने अनुमति दिएको हो । अब ‘एनसेल प्रालि’ को नममा सेवा दिँदै आएको अब ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड’को रुपमा रहनेछ ।
पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनका लागि कम्पनीले २०७५ साालको सुरुवाततमै निवेदन दिएको थियो ।
रेष्टुरेन्ट तथा बारका मजदूरले बैशाख १ देखिको तलब पाउने
काठमाडौं, ११ साउन । रेष्टुरेन्ट तथा बार एशोसिएसन नेपाल (रेबान) मा आबद्ध मजदुरहरुले बैशाख १ गतेदेखिको तलब पाउने भएका छन् । रेबान र पर्यटन तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा क्रियाशिल केन्द्रिय ट्रेड युनियनन संघहरुबीच सामुहिक सम्झौता अनुसार ४ हजार १ सय रुपैयाँ पाउने छन् ।
चैत ११ गतेबाटै रेष्टुरेन्टहरु बन्द भए पनि मजदूरहरुले भने बैशाख १ गतेदेखिको मात्र तलब पाउने भएका हुन् । यो सहमति पुस १६ गतेसम्म लागू हुने छ । रेबानका महासचिव एकराज अधिकारीले लकडाउनको अवस्था रहेसम्म प्रत्येक दुई दिन र लकडाउन खुलेपछि प्रत्येक ३० दिन काममा नबोलाइएमा चार दिनको दरले सम्झौताको अवधि भरी हुन आउने सञ्चित विदाबाट कट्टा गरिने बताए ।
गन्तव्य नेपालद्वारा १७ जनालाई ‘कोरोना डिफेन्स अवार्ड’ प्रदान
काठमाडौं, २ साउन । गन्तव्य नेपालले कोरोना महामारीसँग जुध्न समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहेर योगदान पुर्याएका १७ जनालाई कोरोना डिफेन्स अवार्ड २०२० ले सम्मानित गरेको छ । आज नक्साल हात्तीसारस्थित अरण्य बुटिक होटलमा आयोजित अवार्ड वितरण कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई, संघीय सांसद बहादुरसिंह लामा, बोधिसत्व विहारका सुप्रिम मास्टर हेगुवाङ शी, अवार्ड छनोट समितिका संयोजक रामशरण थपलियासँगै गन्तव्य नेपाल ग्रुपका अध्यक्ष शिव अधिकारी अविरलले देशभरबाट छनोटमा परेका १७ सामाजिक अभियन्तालाई अवार्ड प्रदान गरे ।
यसअघि, अवार्ड पाउने व्यक्तित्वहरुको छनोटका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामशरण थपलियाको संयोजकत्वमा नेपाल एयरलाइन्सका सञ्चालक समिति सदस्य फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा, वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी गोपाल बाबु श्रेष्ठ, रसुवा–नुवाकोट पर्यटन समाजका अध्यक्ष बलराम न्यौपाने र रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमला सम्मिलित पाँच सदस्यीय अवार्ड छनोट समिति गठन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा ‘नेपाल लकडाउन फुड च्यारिटी’ सञ्चालन गरी जारी महामारीबीच ५ लाखभन्दा बढीलाई निःशुल्क खाना खुवाएको र देशभरका विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, कारागार, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको बोधिसत्व विहारका सुप्रिम मास्टर ताइवानी नागरिक हेगुवाङ शीलाई ‘हिरो अफ दी कोरोना डिफेन्स अवार्ड–२०२०’ले सम्मानित गरियो ।
यस्तै, महामारीबीच गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण लगायतका कार्यमा उल्लेख्य योगदान गरेका नेपाल–मुम्बई चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष रमेशकुमार पाठकलाई ‘कोरोना डिफेन्स अचिभमेन्ट अवार्ड’ र सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिका अध्यक्ष मिग्मा शेर्पालाई ‘कोरोना डिफेन्स नोबेल अवार्ड’ प्रदान गरियो । अन्य १४ सामाजिक व्यक्तित्व ‘कोरोना डिफेन्स अवार्ड–२०२०’ बाट सम्मानित भए ।
यसरी सम्मानित हुनेमा कामपा वडा–३ का वडाध्यक्ष दीपक केसी, पर्यटन व्यवसायीहरु तेजेन्द्र शर्मा पौडेल, गीता गुरुङ, कमला गुरुङ, रमेश गौतम, फुरी कितार शेर्पा, सन्तोष राई, सामाजिक अभियन्ताहरु क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठ, हिरा पाण्डे, दिलबहादुर तामाङ, सुमन कार्की, पत्रकारहरु रामजी बगाले, शिव देवकोटा, फोटो पत्रकार तेजबहादुर बस्नेत छन् ।
अवार्ड वितरणपछि बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानमन्त्री डा। भट्टराईले महामारीका बीच सरकारले निभाउन नसकेको भूमिका निजी वा संस्थागत तहबाटै निर्वाह गरेकोमा अवार्ड पाउने अभियन्ताहरुलाई धन्यवादसहित बधाई दिए । सम्मान गरेर अभियन्ताहरुको हौसला बढाउने गन्तव्य नेपाल ग्रुप र अध्यक्ष शिव अधिकारी अविरलप्रति उनले विशेष आभार प्रकट गरे । यतिखेर सिंगो देशले रोग र भोक दुवैसँग उत्तिकै लड्नुपर्ने अवस्था आइपरेको भन्दै डा। भट्टराईले रोगसँग डराएर घर बस्दा भोकले मरिने र भोकलाई जित्न बाहिर निस्किँदा रोगले मरिने खतरा रहेको यो संवेदनशील घडीमा निकै संयमित र होसियार भएर सावधानीका उपाय अपनाउँदै पेसा–व्यवसायमा फर्किन व्यवसायीहरुलाई सुझाव दिए ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि कुर्सीको चक्करमा रुमल्लिएर समय बर्बाद गरेको भन्दै भट्टराईले सरकारको आलोचना गरे । कार्यक्रमका विशेष अतिथि बहादुरसिंह लामाले महामारीसँग जुध्ने अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरी अवार्ड प्राप्त गरेका अभियन्ताहरुलाई बधाईसँगै धन्यवाद दिए भने अवार्ड आयोजना गरेर सामाजिक क्षेत्रमा केही गर्छु भन्नेहरुको हौसला बुलन्द गर्ने गन्तव्य नेपालप्रति विशेष आभार प्रकट गरे ।
हिरो अफ दी कोरोना डिफेन्स अवार्डबाट सम्मानित बोधिसत्वका मास्टर हेगुवाङ शीले संयोगवश आफू नेपाल आएका बेला लकडाउन भएकाले यतै अड्किएको भए पनि लकडाउनभरि बुद्धको जन्मभूमिमा रहेर मानवीय सेवामा सक्रिय रहन पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको भन्दै यो संयोगलाई आफूले बुद्धकै आशीर्वादका रुपमा लिएको बताए ।
आयोजक गन्तव्य नेपाल ग्रुपका अध्यक्ष शिव अधिकारी ‘अविरल’ले गन्तव्य नेपालले यसअघि पनि समय–स न्दर्भअनुकूल व्यवसायी प्रोत्साहन, पत्रकार सम्मान लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको स्मरण गर्दै जारी महामारीबीच कोरोना प्रतिरोधी अभियान नै चलाएर स्वास्थ्य सामग्री वितरण लगायतका कार्य गर्दै आएको र कोरोना डिफेन्स अवार्ड यसैको निरन्तरता रहेको बताए । अझै पनि थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै उनले आफ्नो कोरोना प्रतिरोधी अभियान निरन्तर जारी रहने र यस्ता अवार्डका कार्यक्रमहरु प्नि गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेर अवार्ड प्राप्त गर्न सफल अभियन्ताहरुलाई उनले बधाईसँगै धन्यवाद दिँदै उनले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेकोमा अवार्ड छनोट समितिका संयोजकसहित सदस्यहरुलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
काठमाडौं , ८ असार । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको सोती खोला जलविद्युत आयोजनाको सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ लिमिटेडलाई दिइएको छ । एक हजार बढी लगानीकर्ताको सामूहिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजना निर्माणको सम्पुर्ण निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको काम हाइड्रो कन्सल्टले गर्ने छ । प्रबर्द्धक कम्पनी भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेल र हाइड्रो कन्सल्टका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मनोहर श्रेष्ठले आज उक्त सम्झौतामा हस्तान्तर गरे । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाबाट २५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए । छ महिनादेखि निर्माणको काम भैरहेको आयोजनाको आगामी २४ देखि २७ महिना भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको पोखरेलले जानकारी दिए । आयोजनाको ३० प्रतिशत स्वपूँजी रहने र ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट ऋण लिइनेछ । स्वपूँजीमा बुटवल र कास्कीका लगानीकर्ता सहभागी हुनेछन् । अघिल्लो मङ्सिरमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनी लुम्बिनी भिजनबीच विद्युत् खरीदसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भैसकेको छ । सम्झौताअनुसार उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् वर्षायाममा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसामा प्राधिकरणले खरीद गर्नेछ । उत्पादित विद्युत कास्कीको लाहाचोकमा रहेको प्राधिकरणको सव- स्टेशनमा जोडिने छ ।
काठमाडौं, २० जेठ । गन्तव्य नेपाल ग्रुपको संयोजनमा कोरोना महामारीबीच रिपोर्टिङमा खटिने पत्रकारहरूको सुरक्षा र सहजताका लागि पिपिई सेट, प्रेस ज्याकेट लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको छ ।
१६ जेठमा नक्साल स्थित नारायण चौरबाट १२० जना पत्रकारलाई पिपिई सेट, प्रेस ज्याकेट, मास्क, ग्लब्स र स्यानिटाइजर वितरण गरेका गन्तव्य नेपाल ग्रुपका अध्यक्ष शिव अधिकारी अविरलले आज दोस्रो चरणमा महाराजगन्ज स्थित कामपा वडा नं ३ को कार्यालय परिसरबाट सो दिन छुटेका ५० भन्दा बढी पत्रकारलाई तिनै सामग्री वितरण गरे ।
वितरणपछि अध्यक्ष अधिकारीले एक वक्तव्य जारी गर्दै ुपहिलो चरणमा विविध कारणले छुटेका ५० जनाभन्दा बढी पत्रकारलाई सामाजिक दुरी कायम गर्दै पिपिई सेट, प्रेस ज्याकेट, मास्क, ग्लब्स र स्यानिटाइजर हस्तान्तरण गरिएको र यो क्रम अझै जारी रहनेु बताएका छन् । अधिकारीका अनुसार, जोखिमको समयमा सूचना प्रवाहमा क्रियाशील पत्रकारको सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने गन्तव्य नेपालको अभियान निरन्तर अघि बढ्नेछ ।
वक्तव्य मार्फत अधिकारीले सामग्री व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने बोधिसत्व विहार प्रति आभार प्रकट गरेका छन् । ूसामग्री व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने बोधिसत्व विहार परिवार र विशेष गरी विहारका मूल गुरु हाल नेपालमा रहनुभएका ताइवानी नागरिक हेगुवाङ शी प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं,ू अधिकारीको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अधिकारीकै अध्यक्षतामा दुई साताअघि राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार समाज ९नाटोज० ले पनि पाँच दर्जन जति पत्रकारलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको थियो ।
कोरोना भाइरस व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन बनेको जानकारहरुको दाबी
काठमाण्डौ, २ जेठ । कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारको गलत व्यवस्थापन र उदासीनताको कारण मुलुक उच्च जोखिम तर्फ उन्मुख रहेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले स्वास्थ क्षेत्रसंग सम्वन्धित विज्ञ, निजी अस्पतालका संचालकहरु र स्वास्थकर्मीसंग सम्वन्धित पक्षहरुसंग परामर्श सुरु गरेको छ । काङ्ग्रेसको केन्द्रले गठन गरेको अर्थतन्त्र केन्द्रित बिशेष समितिले नीजि स्वास्थ सेवा क्षेत्र, विशेषज्ञ र स्वास्थ क्षेत्रसंग सम्वन्धित संघ संस्थाहरुसंग परामर्श थालेको हो।
नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना संक्रमणको कारण मुलुकमा पर्ने आर्थिक र राहत सम्वन्धि विषयमा आवश्यक अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गर्न पुर्व.अर्थ तथा परराष्ट्र मन्त्री डा.रामशरण महतको संयाजकत्वमा बिशेष समिति गठन गरेको थियो । गठित समितिमा पुर्व अर्थमन्त्रीहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु सहभागि छन् ।
समितिका स्वास्थ र शिक्षा क्षेत्रको अध्ययन गर्ने समितिका सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेलको आयोजना तथा सहजकर्ता रमेशकुमार महत र रामकुमार कार्कीलेले संयोजन गरेका उक्त वैठक महाराजगंजस्थित चिरायु अस्पतालको सभा कक्षमा आयोजना गरिएको थियो । उक्त छलफलमा ग्राण्डि अस्पताल,नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटि,स्टार अस्पताल,वि.पि.स्मृति अस्पताल,चिरायु अस्पतालका प्रतिनिधि छलफलमा सहभागि थिए ।
छलफलमा विज्ञहरु डा.चक्रराज पाण्डे,डा.भुपेन्द्र वस्नेत,डा.बद्रि रिजाल,डा.धन वहादुर राना मगर,डा.मुक्ति श्रेष्ठ,प्रो.सलामुद्दिन मिया,नेपाल मेडिकल कलेजका निर्देशक डा.राजेश किशोर श्रेष्ठ र चिरायु अस्पतालका निर्देशक चन्द्रेश्वर वैद्य,स्वास्थ कर्मी संघका अध्यक्ष रामराजा घिमिरे, मुना राना, मिना पुन, सलनुद्दिन मिया,कुमार के.सि.,सरला के.सि., नेपाल मेडिकल एसोसियसनका महासचिव डा.बद्री रिजाल,वि.पि.स्मृति अस्पतालका निर्देशक धन वहादुर राना लगायतले भाईरस सक्रमण र यसको नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएका छन् ।
विज्ञहरुका अनुसार लकडाऊन व्यवस्थित नभएको,लकडाउनको अवधिमा सरकारले गर्नु पर्ने आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको,जसको कारण संक्रमणले भयावह अवस्था आऊन सक्ने सुझाएका थिए । निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरुले भने आफुहरु यस कठिन घडिमा सम्पुर्णरुपले मुलुक र जनताको लागि आवस्यक सहयोग र सेवा गर्न तयार रहेको तर सरकारले भने सहयोग लिने वातावरण वनाऊन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
छलफलमा उठेका विषयहरुलाई समितिका सदस्य डा.पोखरेलले उठेका विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पहल गर्ने जानकारी दिए ।
सुन प्रतितोला दुई सय घट्यो
शेयर बजारः नेप्सेमा करिब चार अंकको बृद्धिसँगै कारोबार रकम पनि बढ्यो
पेट्रोल र डिजलको भाउ बढ्यो
सेयर बजारमा झिनो गिरावट, तीन सूचक उकालो लागे
चीनबाट प्याजको आयात बढेपछि राहत
प्रतितोला २०० ले घट्यो सुन
भिर काट्न नसक्दा मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा समस्या
नेप्से सामान्य अंकको गिरावट
शेयर बजारमा निरन्तर करेक्सन , कारोबार रकममा पनि उच्च गिरावट
प्रतितोला दुई सयले बढ्यो सुनको भाउ
शेयर बजारमा उत्साह ,नेप्सेमा दोहोरो अंकको बृद्धि
धानको मूल्य नपाउँदा किसान चिन्तित
शेयर बजारमा नेप्से स्थिर, करोबार रकम घट्यो
शेयर बजारः रोकिएन नेप्से घट्ने क्रम
निरन्तर ओरालो लाग्दै सुनको भाउ
सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट, चाँदी स्थिर
मैनबत्ती बिक्रीबाट ७० हजार कमाइ
बढ्यो सु्नचाँदीको मूल्य
तिहारमा २५ लाख मालाको माग, साढे दुई लाख आयात गर्नुपर्ने
मूल्य आकाशिएपछि कालीमाटीको प्याज गोदाममा छापा
दशैँका लागि ल्याएको खसी, बोका बिक्री हुन सकेन
४.६६ अंकले घट्यो नेप्से
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको भने बढ्यो
सुन तोलामा ६ सयले घट्यो
व्यवस्थापनको अभावका कारण देशभित्रै पर्याप्त भएको काठ पनि विदेशकै भरपर्नु पर्ने वाध्यता
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि १० करोड ३५ लाख बजेट
पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम आयातसँगै मूल्य पनि घट्यो
यस वर्ष सुन कारोबारमा कमीः ७५ प्रतिशतले कम भयो
उखुबालीमा किराको प्रकोपः किसान चिन्तित
सुनको भाउ घट्यो, चाँदीको मूल्य स्थिर
सुनको मूल्य ७३ हजार पाँच सय पुग्‍यो
तोलामा ७ सय रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य
नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट ,कारोबार रकममा भने बृद्धि
चितवनका किसानले बेच्छन् वर्षमा १ अर्ब ५० करोडको केरा
९ अंकले घट्यो नेस्से
खाना पकाउने ग्यासको मूल्य २५ रुपैयाँ घट्यो, पेट्रोल र डिजेलमा भने बढ्यो
सुनको भाउ अझैं महँगीयो
सुन प्रतितोला मूल्य ६६ हजार ३ सय रुपैयाँः अहिलेसम्मकै महँगो
करोडौँ मूल्यको आलु कुहियो
तनहुँमा एक वर्षमा १ हजार १ सय ३५ घरेलु उद्योग दर्ता, २ हजार भन्दा बढीले पाए रोजगार
शेयर बजारः नेप्सेमा तीन अङ्कको वृद्धि
मौद्रिक नीति मार्फत कृषि तथा उद्यम कर्जाको दायरा बढाइयो
आज मौद्रिक नीति आउने
इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि हुने
सिमेन्ट लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याक गरेर बजार पठाउनुपर्ने
असार २६, काठमाडौं । स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित सिमेन्ट लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर मात्र बजारमा पठाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी सिमेन्टलाई लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर मात्र बजारमा पठाउन सिमेन्ट उत्पादक सङ्घलाई आग्रह गरेको हो।
११ महिनामा ४६ करोडको विदेशी डटपेन खपत
असार २४, काठमाडौं । नेपालमै डटपेन, मार्कर तथा अध्यापन साम्रगीहरु निर्माण भएपनि सबै क्षेत्रमा पु¥याउन नसक्दा भारत तथा विभिन्न देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था नेपालको रहेको छ । पछिल्लो ११ महिनामा नेपालीहररुले ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेख्ने डटपेन खपत गरेका छन् ।
प्रतिक्यारेट ३० रुपैयाँले बढ्यो अण्डा
असार २२, काठमाडौं । नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घले शनिबार (हिजो) बाट ठूलो अण्डामा प्रतिक्यारेट २५ र मध्यम साइजको अण्डामा प्रतिक्यारेट ३० रूपैयाँ बढाइएको छ । अब किसानहरूले ठूलो अण्डामा २ सय ८० रूपैयाँ पाउँनेछन् भने मध्यम साइजको अण्डामा प्रतिक्यारेट २ सय ३० रूपैयाँ पाउँनेछन् । यसअघि भने ठूलो अण्डामा २५५ रुपैयाँ र मध्यम साइजको अण्डामा २ सय रुपैयाँ प्रतिक्यारेट पाउने गरेका थिए ।
तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणको निर्णय स्थगित
असार २२, काठमाडौं । भारत लगायत विदेशी मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्रिन दिने सरकारी निर्णय स्थगित भएको छ ।
असार २०, रुपन्देही । अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ पटकपटक सरेपछि बुटवल सडक विस्तारको काममा अन्योल भएको छ । कहिले मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुने र कहिले सर्ने भएपछि सडक विस्तार मुद्दाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
असार १९, काठमाडौं । लमजुङको बेंशीसहर नगरपालिकामा निजी क्षेत्रबाट अत्याधुनिक प्रविधिसहितको ‘स्मार्ट फिल्म सिटी’ निर्माण हुने भएको छ।
हुवावेको संकट चर्कदो, एसडी कार्डको सदस्यता खोसियो
नेपालमा बिदेशी लगानी आएन ! सुन लगाएर आएका लगानीकर्ता हिरासतमा राखेर धपाईए !
उद्योगमा प्रचलित रेटमा बिधुत महशुल लिने प्राधिकरणको तयारी
काठमाडौं । औद्योगिक करिडोरमा समेत विद्युतभार कटौतीको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा उद्योगलाई समेत समयानुकूल विद्युत् महसुल दर लागू गर्ने तयारी गरिएको छ ।
विगतमा विद्युतभार कटौती हुँदा उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन बढी शुल्क तिरेर उद्योगले विद्युत् लिने गरेका थिए ।
४६ करोड लागतमा बन्दै गरेको कर्णालीको पुल जोखिममा
७ चैत, धम्बोजी । बर्दिया जिल्लाको राजापुर क्षेत्रलाई कैलाली जिल्लासँग जोड्न कर्णाली नदीमा बनेको पुल जोखिममा परेको छ ।
त्रिशुली ‘थ्री बी’ को शेयर सर्वसाधरणका लागि खुल्ला, प्रधानमन्त्रीले दिए निवेदन
७ चैत्र, काठमाडौं। आजबाट ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत माथिल्लो त्रिशुली ‘थ्री बी’ को शेयर सर्वसाधरणका लागि खुल्ला गरिएको छ ।
४ चैत्र, काठमाडौँ । सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ । आईतबारको तुलनामा सुन प्रति तोला ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ भने चाँदीको ५ रुपैयाँले कारोबार भैरहेको छ ।
विराटनगर पुगेर प्रधानमन्त्रीले भने– ट्रकका ट्रक तरकारी काठमाडौं ल्याउनुस्, नबिके विदेश पठाउँछ
३ चैत्र, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशले कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान दिनु पर्ने बताएका छन् । मोरङमा फलफूल तथा तरकारी थोक बजारको उद्घाटन् एवम् हस्तान्तरण समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय आयलाई योगदान दिने गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्ने र त्यसका लागि सरकाले सहयोग उपलब्ध गराउने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्ने बताए ।
त्रिशूली थ्री ‘ए’ अन्तिम चरणमा, सञ्चालनपछि वार्षिक करिब तीन अर्ब रूपैयाँ आम्दानी हुने
२९ फागुन, बेत्रावती । रसुवामा बाँध र नुवाकोटमा विद्युत् उत्पादन गृह रहेको ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रतिकिलो ५० रूपैयाँ दरबाट बेच्दा, बारीबाटै गोलभेँडा खोसाखोस
२८ फागुन, तनहुँ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१२ जसपुरका रिमबहादुर गुरुङले बारीबाटै गोलभेँडा बिक्री गर्न थालेका छन् । विदेशबाट फर्किएपछि गाउँमा कुन पेशा गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेका उनी अहिले बारीबाटै गोलभेँडा बिक्री हुन थालेपछि उत्साहित भएका छन् ।
कोटेश्वर–कलङ्की सडकको त्रुटिमा सामान्य सुधार
२६ फागुन, ललितपुर । कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा चालक र यात्रुलाई सहज बनाउनका लागि सामान्य सुधारका काम शुरु भएको छ ।
नेप्सेको प्रणालीमा गडबड भएपछि कारोबार ठप्प
फागुन २६, काठमाण्डौ । साताको पहिलो हप्ता आइतबार शेयरबजार परिसूचक नेप्सेको प्रणालीमा गडबड भएपछि कारोबार रोकिएको छ ।
पचास दरका २३ करोड थान नयाँ नोट छापिँदै
फागुन २२, २०७५ काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु ५० दरको २३ करोड थान नयाँ नोट छाप्ने भएको छ। बैंकले उक्त नयाँ नोट छाप्नका लागि फ्रान्सको ओवर्थर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। विश्वव्यापी बोलपत्रका आधारमा फ्रान्सेली कम्पनी छानिएको हो।
एक हप्तामा प्रतितोला १८ सय रुपैयाँले घट्यो
फागुन २१, काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले अघिल्ले हप्ता ६२ हजार ८ सय रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको सुन आज ६१ हजार रुपैयाँमा झरेको जनाएको छ।
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा शेयरको मूल्य करिब पाँच अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४.९५ विन्दुले घटेर ११००.५८ विन्दुमा झरेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.९५ विन्दुले घटेर २३३.८८ विन्दुमा कायम भएको छ । स्टकका अनुसार कूल १७४ कम्पनीको आठ लाख ७३ हजार ४९५ कित्ता शेयर रु २३ करोड ५३ लाख २० हजार ९४० मूल्यमा खरीद बिक्री भए ।
काठमाण्डौ । सुनको भाउ आज तोलामा ४ सय रुपैयाँ घटेको छ । सुन आज तोलाको ६२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
तत्काललाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदैनः नेपाल आयलनिगम
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवद्धि तत्काल नहुने नेपाल आयल निगमले स्पष्ट पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भए पनि नेपालमा भने तत्कालका लागि मूल्य वृद्धि नगर्ने निगमले स्पष्ट पारेको हो ।
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सामान्य सुधार आएको छ । नेप्से सूचक बिहीबार ०.८४ अंकले बढेर १११३.०७ विन्दुमा आइपुगेको छ । बजार समग्रमा ०.०८५ ले बढेको हो । १५५ कम्पनीको १६ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार रकम औसतमा कम हो ।
१६० करोडको लागतमा रविभवनमा खुल्दैछ चार तारे होटल ‘क्राउन इमेरियल’
काठमाडौँ । रविभवनमा क्राउन इमेरियल होटल सञ्चालनमा आउने भएको छ । ५ रोपनी क्षेत्रमा १५ तलाको होटल निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
काठमाण्डौ । सोमबारको तुलनामा आज मंगलबार अमेरिकी डलरसहित सबै विदेशी मुद्राको भाउ केही पैसा बढेको छ ।
पर्यटन व्यवसायतर्फ आकर्षित भएर गोल्छा अर्गनाइजेसन अर्ब लगानीमा रिसोर्ट खोल्दै
विराटनगर । खाद्यान्न प्रशोधन र अटोमोबाइल क्षेत्रको उद्योगमा संलग्न गोल्छा अर्गनाइजेसनका सुरेन्द्र गोल्छा पर्यटन व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
कुखुराबाट राम्रो आम्दानी
उदयपुर । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि लोकल कुखुरापालनबाट एक युवाले छोटो अवधिमै सोचेभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । साउदी र कतारमा सात वर्ष काम गरेर फर्किएका उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–४ बगाहाका दिनेश निरौलाले लोकल कुखुराको फार्म सञ्चालन गरी राम्रो आम्दानी गरेका हुन् ।
सुनको भाउ बढ्यो, तोलमा कति पुग्यो
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ ४०० ले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुनको भाउ तोलमा ६२ हजार ५०० मा कारोबार भइरहेको छ ।
म्याट्रेसपछि लुम्विनी समूह कार्पेट उद्योगमा, जेन्सा ब्राण्डमा कार्पेट उत्पादन
काठमाडौं । घर, होटल तथा कार्यालय सजावटको लागी प्रयोग हुने कार्पेटको बजारमा रुपन्देहीको रोहिनी गाउँपालिकामा अवस्थित आशी इण्डष्ट्रिज प्रालिले विभिन्न छ प्रकारका फाइबर कार्पेटसहित बजारमा प्रवेश गरेको हो ।
एक सातामा २७ अंकले घट्यो नेप्से
काठमाडौँ । यो साता शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से घटेको छ । बजरमा लगानी योग्य रकम अभाव हुँदा कारोबार न्यून भएपनि बिहीबार भएको एभरेष्ट बैंकको कारोबारले ३ अर्ब बढीको कारोबार भएको छ ।
साताको अन्तिम दिन सुनको मूल्य बढ्यो
काठमाडौँ । साताको अन्तिम दिन सुनको मूल्य बढेको छ । सुनको मूल्य बृद्धि भएको भएपनि चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । बिहिवारको तुलनामा सुन प्रति तोला ४ सय रुपैयाँले बृद्धि भएको हो ।
चितवन । पश्चिमा संस्कृति भए पनि पछिल्लो समय नेपालमा प्रणय दिवस ’भ्यालेनटाइन डे’ मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । प्रणय दिवसमा गुलाबको फूलको माग बढ्दो छ ।
०.६७ अंकले घट्यो नेप्से
काठमाडौँ । सोमबार सामान्य सुधार देखिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० मंगलबार भने ०.६७ अंकले घटेर ११२८.१९ विन्दुमा आइपुगेको छ । समग्रमा बजार ०.०६५ ले घटेको हो । कुल १६४ कम्पनीको १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको छ । ८ लाख ४६ हजार ७८० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका हुन् ।
काठमाडौं । भारत सरकारले प्रस्तावित ४०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन सोमबार सेयर बजारमा सुधार देखिएको छ । साताको पहिलो दिन १२ अंक भन्दा बढीको गिरावट देखिएको सेयर बजारमा सोमबार १ दशमलव ३४ अंकको सुधार देखिएको ।
अझै रोकिएन सेतोचिनी तस्करी
जाजरकोट । वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी सङ्कलन गरिएको सेतोचिनी ९खिरौलो०को निकासीसमेत अवैद्य तरिकाले भएको पाइएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी जथाभावी सङ्कलित खिरौलो अवैध तरिकाले निकासी हुने क्रम नरोकएकाले वन उपभोक्ता समितिले ठेकेदारका नाममा उजुरी दिएपछि डिभिजन वन कार्यालयबाट सिफारिश दिने काम भने रोकिएको छ।
सुन–चाँदीको भाउ घट्यो
काठमाण्डौ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार बिहीबार सुनको तोलामा ४ सय रुपैयाँ घटेको छ । महासंघले बिहीबारका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला ६२ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको जनाएको हो ।
फागुनबाट इलाम नगरपालिकाले प्रदूषण कर नलिने
इलाम । इलाम नगरपालिकाले स्थानीय सरकारले लगाएको प्रदूषण कर हटाउने भएको छ । चर्को जनगुनासो आएपछि कर हटाउन लागिएको हो ।
काठमाडौं। बुधबार शेयर बजारमा ७.३८ अंकले गिरावट आएको छ । सूचक सँगै कारोबार रकम पनि २३ करोड ५६ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । ०.६४ प्रतिशतले सूचक घटेर ११३९.७२ अंकमा झरेको हो ।
६ करोड बढीको अकबरे खुर्सानी निर्यात
तेह्रथुम । तेह्रथुमबाट यो वर्षको सिजनमा ६ करोड बढीको अकबरे खुर्सानी निर्यात भएको छ ।
अलै‌ची र अदुवापछि तेह्रथुमको प्रमुख नगदेवाली खुर्सानी हो । जेठदेखि पुससम्म विरुवा, फल र वियाँ विक्री गरेर ६ वटै स्थानीय तहका किसानले ६ करोड रुपैयाँ भित्र्याएका हुन् । स्थानीय बजारमा प्रतिकेजी २ सय ५० देखि ३ सय ५० रुपैयाँमा खुर्सानी विक्री भईरहेको छ ।
दुई महिनाभित्र नेपालबाटै ब्रिटानिया बिस्कुट उत्पादन हुने
वीरगंज । दुई महिनाभित्र ब्रिटानिया बिस्कुट नेपालबाटै उत्पादन सुरु हुने भएको छ। भारतको लोकप्रिय ब्राण्ड ब्रिटानियाले शतप्रतिशत वैदेशिक लगानीमा वीरगंजमा उद्योग स्थापनाको काम सुरु गरेको थियो।
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्यमा सामान्य सुधार आएको छ।
पछिल्ला केही दिनदेखि लगातार ओरालो लाग्दै आएको बजारमा केही सुधार देखिएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक २.८३ विन्दुले बढेर एक हजार १४७.१० विन्दुमा पुगेको छ।
३३ किलो सुन प्रकरण : दुबई बसेर सुन पठाउने खड्का पक्राउ
काठमाडौं । ३३ किलो सुन प्रकरणमा संलग्नता देखिएपछि दुबई (युएई) बस्दै आएका हरि खड्का पक्राउ परेका छन् ।
उद्योग क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी घट्यो, गतवर्ष १६ अर्ब, यसवर्ष १४ अर्ब मात्रै
काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी घट्दै गएको छ ।
नेपाली अलैंचीको मूल्य कतारमा छ गुणा बढी
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङलगायत नेपालमा उत्पादित अलैंचीको अन्तिम विन्दु कतारलगायत खाडी मुलुक हुन् ।
नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर, २०७६ सालदेखि विदेशमा निर्यात गर्ने तयारीमा उद्योगी
काठमाडौंँ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको छ । करिब दुई खर्ब रूपैयाँ लगानी भएको र वार्षिक १५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको कारोवार हुँदै आएको सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल यो वर्षदेखि आत्मनिर्भर भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
सामसङको नाफामा ३१ प्रतिशतले गिरावट, २०१९ मा अझै घट्ने
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसङको नाफामा ३१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । कम्पनीको चौथो त्रैमासिक विवरण अनुसार सामसङको नाफामा ३१ प्रतिशतले गिरावट आएको वालस्ट्रिट जर्नलले उल्लेख गरेको छ ।
सनराइजको नाफा २४ प्रतिशतले बढेर ७२ करोड पुग्यो
काठमाडौं । सनराइज बैंकको नाफा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षको पुस मसान्तको तुलनामा चालु आवको पुस मसान्तमा आफ्नो नाफा २४.१३ प्रतिशतले वृद्धि गरेर ७२ करोड पुर्याएको हो । गत आवको पुस मसान्तमा सनराइजको नाफा ५८ करोड रुपैंयाँ मात्रै थियो ।
च्याउखेतीबाट नाम र दाम दुवै
बर्दिवास । काममा लगन र समर्पण भएपछि कमाउन विदेश जानु पर्दैन भन्ने उदाहरण बनेका छन महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–२ हङकङ डाँडाका दीपक भुजेल । बाली नसप्रिने गेग¥यान जग्गामा ४५ वर्षीय भुजेलले १० टनेलमा च्याउखेती गर्दै आएका छन्।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने मिडिया कारबाहीमा पर्ने
काठमाडौंं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक दिएरनदिएको विषयमा छड्के जाँच शुरू गर्नुभएको छ । आइतबार करीब मध्याह्न १२ बजे मन्त्री बाँस्कोटाले सूचना विभागमा छड्के निरीक्षण गर्नु भएको उहाँनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।
संखुवासभा । भारतले अलैंची खरिद गर्ने छाडेपछि नेपाली बजारमा किनबेच बन्द भएको छ।
काठमाडौँ । यस वर्षको प्रणय दिवसका लागि रु एक करोड ५० लाख मूल्यको एक लाख ६० हजार ‘स्टिम’ गुलाफ आयात गरिने भएको छ । माग बढेकाले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष गुलाफको मूल्य बढ्ने बताइएको छ ।
लगातारको हिमपातले राजमार्ग दुई दिनदेखि अवरुद्ध, चार दिनदेखि छैन बिजुली
बैतडी । लगातारको हिमपातले बैतडी, बझाङ र डडेल्धुराका राजमार्गहरु दुई दिनदेखि अवरुद्ध छन्।
मंगलबारदेखि निरन्तर भएको हिमपात हुँदा सडकमा बाक्लो हिउँ जमेको छ। हिउँ जमेकाले दशरथचन्द राजमार्ग, जयपृथ्वी राजमार्ग र भिमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। बैतडीको अनारखोली, खोडपे, डडेल्धुराको भालुमारे, हगुल्टे साहुँखर्क र बझाङको देउलेक, बित्थडलगायतका क्षेत्रका सडकमा चार फिटसम्म हिउँ जमेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नेत्रमणि गिरीले जानकारी दिए।
रक्सौलबाट भन्सार छलेर भित्र्याइएको सामान भन्सारमै बुझाइयो
पर्सा । सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलबाट भन्सार छली नेपाल भित्र्याइएको १ लाख मूल्य बराबरका सामान सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ ।
जडिबुटी खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै प्यूठानका कृषक
प्यूठान । कृषकहरूमा जडिबुटीखेतीमा आकर्षण बढ्दै गएको छ। जिल्लमा मुख्य रूपमा तेजपात, टिमुर, श्रीखण्ड, चिउरी, चिउरी, दारुहल्दी (चुत्रो), सुगन्धवाल (सोमायो), अमला, पाखनवेद, कुरिलो लगायत जडिबुटी पाइन्छ। तेजपात प्यूठानको हंसपुर, दाङवाङ, वरौला, पकला, चुँजा, मरन्ठाना, खलंगा लगायतका अधिकांश स्थानमा पाइन्छ। ५०० मिटर देखि २,५०० मिटर सम्म टिमुर प्यूठानका खाल, कोचिवाङ, जुम्रीकाढा, माझकोट, फोप्ली, डामृ, लिघा, खवाङ लगायत स्थानमा पाइन्छ। सुगन्धवाल (सोमायो) १,५०० मिटर देखि ३,६०० मिटर सम्म हुनेमा फोप्ली, रजवारा, अर्खा, खवाङ लगायतका ठाउँमा पाइन्छ। काउलो १००० देखि २५०० प्यूठानमा हुने भए पनि खासै उत्पादनको रूपमा लिइएको छैन। त्यसैगरी लोक्ता रजवारा अर्खा, स्याउलीवाङ, डामृ, लिघाका उच्च स्थानमा पाइन्छ।
कावासोती । नवलपुरमा अदुवाबाट मनग्य आम्दानी भएको छ । अदुवाकोबाट कृषकले उचित मूल्य पाएका छन् ।
डोटी । ठूलाबडाको विवाह र बढाइँमा पुराना वीरयोद्धाका कथा तथा राजा रजौटाका गीतमार्फत देखाइने सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रसिद्ध छलिया र हुड्ने नाच हिजोआज व्यावसायिक बन्न थालेको छ ।
पेट्रोलको भाउ ३ सय ७६ रुपैयाँ
जिम्बावेमा इन्धनको मूल्यवृद्धि विरुद्ध भएको प्रदर्शनले उग्ररुप लिएको छ। सरकारले इन्धनको कमी हटाउनका लागि र अवैध कारोबारमा रोक लगाउनका लागि मूल्यवृद्धि गरेपछि आम नागरिक सडकमा उत्रिएका छन्।
शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) नहुँदा सस्तोमै सुन्तलाबेच्न बाध्य छन् किसान
स्याङजा । शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) को अभावका कारण स्याङ्जा चिसापानीका किसानहरु हरियो छँदैदेखि सुन्तला न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य बन्छन् । रुखमै राख्दा पनि असुरक्षित हुने हुनाले उनीहरु सस्तोमै सुन्तला बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन् ।
अदालतको फैसला कुर्दै तनहुँ जलविद्युत्
तनहुँ । १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमिस्ट्री (सिएमसी)को अदालतको फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको छ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनाको तस्बीर हेर्दा मुलुकमा निर्यातभन्दा उपभोग (आयात) को अवस्था डरलाग्दो देखिएको छ।
चोभारमा आधुनिक सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने
काठमाडौं । योजनाअनुसार काम भयो भने अबको डेढ वर्षपछि काठमाडौंमै भन्सार जाँचपासको काम सुरु हुनेछ । यसका लागि चोभारमा आधुनिक सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने काम बिहीबारबाट औपचारिक रुपमा सुरु हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्दरगाहको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ ।
विदुरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन खुल्यो
बेत्रावती । नुवाकोट, रसुवा र धादिङमा सेवा पु¥याउने उद्देश्यले विदुरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
२ अर्ब ९० करोड निक्षेप राख्ने बैंक खोज्दै नागरिक लगानी कोष
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले २ अर्ब ९० करोड निक्षेप राख्ने बैंकको खोजी सुरु गरेको छ ।
व्यवसायीलार्ई चाकु बनाउन भ्याइनभ्याइ
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखाल नगरपालिका– ४ लामीडाँडाका चाकु व्यापारीलाई हिजोआज चाकु बनाउन भ्याइनभ्याइ भएको छ । माघेसङ्क्रान्ति नजिकिँदै गर्दा बजारमा यसको माग बढी हुने भएकाले यतिखेर चाकु व्यवसायी निकै ब्यस्त रहेको देखिन्छ । विगत १५ वर्षदेखि सो व्यवसाय गर्दै आएका पाँचखाल नगरपालिका–४ लामीडाँडाका विष्णुपुकार श्रेष्ठले दैनिक १०० किलोदेखि १५० किलोसम्म चाकु बिक्री भइरहेको बताउनुभयो । “दिनको यति नै व्यापार हुन्छ भन्ने त हुँदैन तर पनि कामदारको ज्याला कटाएर दुई हजारदेखि रु दुई हजार ५०० सम्म कमाइ हुन्छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “चाकु बनाउनलाई दिनको ५० किलोको दुई÷तीन बोरासम्म सख्खर खपत हुन्छ ।”
अनलाइन सिस्टमको गडबडीका कारण अपर तामाकोशीको सेयर कारोबार रद्द
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सोमबार भएको अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सेयर कारोबार रद्द गरेको छ।
बसपार्क निर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दाले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराए
खोटाङ । धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल खोटाङको हलेसीमा निर्माण गर्न लागिएको बसपार्कका लागि पाँच स्थानीय बासिन्दाले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका छन् ।
१ सय झोलुङ्गे पुल यसै वर्ष निर्माण गरिने, तुइन विस्थापित हुने
काठमाडौँ । यस वर्ष १ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले यो वर्षभित्रमा १ सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा
पाँचथर । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुगेको छ । सबै स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा पुगेपछि नागरिकलाई सहज भएको छ ।
काठमाडौँ । शेयरको मूल्य आज पनी पुनः घटेको छ ।
कारोवार मापक नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव चार विन्दुले घटेर एक हजार १७७ दशमलव शून्य सात विन्दुमा झरेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाए । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक शून्य दशमलव शून्य नौ विन्दुले घटेर २४९ दशमलव ८४ विन्दुमा झरेको छ ।
विराटनगर । विराटनगरको तरकारी बजारलाई व्यवस्थित र ‘स्मार्ट’ बनाउने उद्देश्यले मोरङको कटहरीमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न तरकारी तथा फलफूल बजार निर्माण भएको छ ।
शेयर बजारमा सामन्य सुधार
काठमाडौँ । धेरै दिनपछि धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ६ दशमलव ६७ बिन्दुले बढेर एक हजार १७७ दशमलव ७७ बिन्दुमा पुगेको छ ।
महाकालीको उखु भारतमा निर्यात
भीमदत्तनगर । उचित मूल्य पाउन थालेपछि कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा उत्पादित उखु भारतीय बजारमा निर्यात हुन थालेको छ ।
उत्पादनले नथेग्दा बढ्यो मकैको आयात
काठमाडौं । कुखुरापालन व्यवसाय बढ्दै जाँदा मकैको आयात पनि बढेको छ।
५ महिनामै भित्रियो ५ अर्ब ८० करोडको लगानी, हवाई क्षेत्रमा भूटानी ड्रुकएयरको इन्ट्री
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनामा ५ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैँयाको विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको छ । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका अनुसार पछिलो ५ महिनामा २४ वटा विदेशी कम्पनी मार्फत लगानी भिभिएको हो ।
बाँके । भारतबाट आयात गरिएको एक लाख ४४ हजार किलो चिनी चार महीनादेखि नेपालगञ्ज भन्सारमा थन्किएको छ।
बजार नपाएपछि सिगानाका कृषकहरु निराश
बागलुङव । बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानामा उत्पादन भएका सुन्तलाले बजार पाउन नसकेपछि स्थानीय कृषकहरु निराश बनेका छन् । गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष किसानहरुले आधा मुल्य पनि पाउन नसकेपछि सुन्तला बोटमा कुहिएर झर्न थालेका हुन् ।
पाँचवर्षमा ३ हजार ४ सय पोखरी बनाइने
काठमाडौं । सरकारले वन्यजन्तुलाई खाने, बस्ने र आहाल बस्ने प्रयोजनको लागि पोखरी निर्माण गर्न ६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी सात प्रदेश सरकारको नाममा पठाएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले मंसिर महिनामा साधारण प्रशासन शीर्षकबाट रकमान्तर गरी उक्त रकम प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गरेको हो ।
मेकाडामिया नट खेतीतर्फ कृषक आकर्षित
पोखरा । स्याङ्जाका कृषकहरु मेकाडामिया नट खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
१३ प्रतिशत व्याजदरमा खाता खोल्नेले अब कति पाउँछन् ?
काठमाडौं । व्यक्तिगत मुद्दती खातामा १३ प्रतिशत व्याज दिनेगरी विभिन्न बैंकहरुले ग्राहक तानेका छन् । धेरैले मुद्दती खाता खोले र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १३ प्रतिशत व्याजकै लागि रकम सारे।
तीन महिनाभित्रै भारतबाट पेट्रोलियम १२ दशमलव दुई किलोमिटर पाइप ओछ्याउन बाँकी
वीरगञ्ज । नेपाल तथा भारत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप अब १२ दशमलव दुई किलोमिटर मात्र ओछ्याउन बाँकी रहेको छ ।
बागलुङ नगरमा विश्व बैंकले लगानी गर्ने
बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाको पूर्वाधार सुधारका लागि विश्व बैंकले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ।
काठमाडौं । बिहिबार छापावाल सुनको भाउ स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबार सुन तोलमा ५८ हजार ८०० मा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार पनि सुन यही भाउमा कारोबार भएको थियो ।
६ अर्ब ९० करोडको हतियार खरिद गर्दै नेपाल
काठमाडौं । नेपाली सेनाका लागि आवश्यक हतियार अमेरिकाबाट खरिद गर्ने योजना नेपालले बनाएको छ । नेपालले ६ अर्ब ९० करोड बराबरको हतियार खरिद गर्ने भएको छ ।
सिमेन्टमा साढे १२ अर्ब स्वदेशी लगानी प्रतिवद्धता, २५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने
काठमाडौं। सिमेन्ट उद्योगमा साढे १२ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ। कपिलवस्तुमा स्थापना हुन लागेको सिनर्जी सिमेन्ट उद्योगले ९ अर्ब ७८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ।
एक सयभन्दा माथिका भारतीय नोटमा प्रतिबन्धः सीमावर्ती बजारमा समस्या
झापा । सरकारले दुईहजार, पाँचसय र दुई सय दरका भारतीय नोटको चलन चल्तीमा प्रतिबन्ध लगाए सँगै त्यसको असर झापाका बजारमा समेत देखिन थालेको छ । केही दिन अघिबाट त्यस्ता नोटमा प्रतिबन्ध लगाए पछि झापाका सिमावर्ती बजारहरुमा पनि त्यसको असर देखापर्न थालेको हो ।
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ५२ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार विद्युत् खरीद सम्झौता भएका ती आयोजनाको क्षमता एक हजार ५१ मेगावाट रहेका छन् ।
काठमाडौँ । शेयर बजारमा आइतबार उच्च बृद्धि भएको छ । सरकारले ब्याजदर र गिरावट आएको शेयरबजारका सम्बन्धमा सकारात्मक कदम चाल्न सक्ने अपेक्षाका लगानीकर्ताले गर्दा नेप्सेसँगै कारोबार रकममा उच्च बृद्धि भएको हो ।
सातौं लुम्बिनी राष्ट्रिय महोत्सव सुरुः स्वदेशी हस्तकलामा उपभोक्ताको आकर्षण
भैरहवा। सातौं लुम्बिनी राष्ट्रिय महोत्सवमा भैरहवामा सुरु भइसकेको छ । महोत्सवको मुख्य आकर्षण नेपाली धागोबाट निर्मित स्टकोट, ब्याग रहेको छ । जिल्लामा हुने मेला तथा महोत्सवमा अन्य स्टलको तुलनामा नेपाली धागोबाट उत्पादित वस्तु र हस्तकलामा नै नेपाली उपभोक्ताको भीडभाड लाग्ने गरेको छ ।
एक किलो नुनको मूल्य ७० पुग्यो
हुम्ला । हुम्लाको एक गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले महँगो मूल्य तिरेर आयोडिनयुक्त नुन खान बाध्य भएका छन् । सर्केगाड गाँउपालिकामा त्यहाँको डिपोले रु १० मा बिक्री वितरण गर्दै आएको भएता पनि यतिबेला उक्त डिपोमा नुनको अभाव भएको छ ।
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गर्दै काठमाडौंमा अनशन सुरु गरेका छन्।
गोरखा । गोरखा नगरपालिका–१४ स्थित गोर्वुङमा करीब रु चार करोडको लागतमा जडीबुटी खेती शुरु भएको छ ।
नाफिजको नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । शुक्रबार राजधानीमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । नाफिजको चौथो महासभाले सिताराम भट्टराईको अध्यक्षतामा नाफिजको नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मतले चयन गरेको हो ।
नेप्सेको अनलाइन प्रणालीको समस्या सुल्झियो
चिनीमा चलखेल छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीमा भएको आर्थिक चलखेल छानबिन गर्न पत्राचार गरेको छ । अर्थ र आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका विभागको मिलेमतोमा चिनी आयात बन्द गरी १२ उद्योगीको कार्टेलिङ गराएको विस्तृत छानबिन गर्न पत्रचार गरेको हो ।
काठमाडौँ । बुधबार उच्च बिन्दुले घटेको शेयर बजार आज भने सामान्य अङ्कले बढेको छ ।
तेह्रथुमका किसान अदुवा खेतीमा आकर्षित
तेह्रथुम । पूर्वी नेपालमा अदुवाले राम्रो बजार पाएको छ । तेह्रथुमका किसान पनि अदुवा उत्पादनमा आकर्षित बनेका छन् ।गत वर्ष अदुवाले बजार नपाउँदा चिन्तित बनेका किसान यसवर्ष उत्साहित छन् । यो बर्ष अन्तराष्ट्रिय बजारमा अदुवाको माग बढ्दो रहेको तथा अदुवाले राम्रो मूल्य पाएपछि किसान हर्षित बनेका हुन् । अहिले अदुवा प्रतिकिलो ४२ रुपैयाँका दरले विक्रि भइरहेको छ ।
चौतारी लघुवित्तको आईपीओ आजदेखि, मध्य भोटेकोशीको निष्काशन प्रक्रिया दोस्रो चरणमा
काठमाडौं । चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आजदेखि आईपीओ निष्कासन गर्दैछ । कम्पनीले ६ लाख कित्ता साधारण शेयर अंकित मूल्य रु १०० मा बिक्री गर्न लागेको हो । उल्लेखित शेयरमध्ये ३०००० कित्ता म्युचअल फण्ड र ९३०० लघुवित्तका कर्मचारीलाई आरक्षित गरिएको छ । बाँकी ५ लाख ६० हजार ७०० कित्ता भने सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको हो ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य बढेको छ।
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले आफ्ना शेयरधनीलाई ३४ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ।
लगानीकर्ताले आगामी २३ गतेदेखि अनलाइन सेयर कारोबारको सुविधा पाउने भएका छन्। कात्तिक २० देखि अनलाइन सेयर कारोबार सुरू भए पनि लगानीकर्ताले ब्रोकर कार्यालयमार्फत् कारोबार गर्दै आएका छन्।
किराले करोडौं नोक्सान
प्राचीन शैलीका घर बनाए नक्शापासमा ५० प्रतिशत छुट
दमौली । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले प्राचीन कला तथा संस्कृतिको संरक्षण हुने गरी घर निर्माण गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले बजार क्षेत्रको ५०० मिटर क्षेत्रभित्र बन्ने घरको नक्शापासका लागि ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपालबाट खानेतेल निकासी, निकासी रोक्न भारतीय व्यापारीको लबिङ
तीन अर्ब लगानीमा आरतीले स्थापना गर्यो डन्डी उद्योग, दैनिक सात सय टन डन्डी उत्पादन गर्ने
विराटनगर। भारतीय लगानीमा मोरङको बुढिगंगा गाउँपालिकामा सञ्चालित आरती स्ट्रिप्सले मंसिर महिनाभित्रै टिएमटी फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा गिरावट नेपालमा भने स्थिर
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर ओरालो लागेको छ ।
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशीको शेयरका लागि आवेदन दिएका सबैले ४० कित्ताका दरले शेर पाउने भएका छन् ।
गोलभेँडा खेतीले वार्षिक पाँच लाख आम्दानी
पर्वत । स्वदेशमा रोजगारी नपाएको र व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको भन्दै युवाहरू विदेशिने क्रममा कमी आएको छैन।
स्वार्थ समूहले गलत मनसाय राखेर भ्रम छर्दैछन् प्रबन्ध निर्देशक कंसाकार
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले नेपाल एयरलाइन्सले खरिद गरेका वाइडबडी जहाजबारे बजारमा भ्रम फैलाउने काम भएको बताएका छन् । कंसाकारले भने निगमले खरिद गरेका वाइडबडी जहाजको स्वामित्व निगमसँगै रहेको बताएका हुन् । केही समययता निगमका वाइडवडी जहाज खरिदसम्बन्धी विभिन्न पक्षले भ्रम फैलाउने कोसिस गरेको भन्दै कंसाकारले भने– जहाज भाडामा लिएको भन्ने कुरा ‘अफवाह’ हो । हामीले किनेको र कम्पनीले बेचेको प्रमाण हामीसँग छ ।
स्याउ आयात बर्षेनी घट्दै
वीरगञ्ज। पछिल्लो चार महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट चार करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको स्याउ र केरा आयात भएको छ ।
तिहारका लागि प्रयोग गरिएका झिलिमिलि बत्तीहरु ९० प्रतिशत चिनियाँ
यो तिहारलाई स्वदेशकै फूलले पुग्ने
काठमाडौं । फ्लोरिकल्चर एशोसियसनले यस वर्षको तिहारका लागि चाहिने आवश्यक फूल स्वदेशी उत्पादनबाटै पुग्ने जनाएको छ।
तुलसीपुरमा दुना–टपरी उद्योग
दाङ । दाङमा पहिलो पटक मेसिनबाट दुना तथा टपरी बनाउन थालिएको छ। तुलसीपुर दुना टपरी उद्योगले सेमिहाइड्रोलिक मेसिनबाट दुना र टपरी उत्पादन गर्न थालेको हो।
ललिपुरमा सुरु भयो गोदावरी मेला
ललितपुर ।१२ औँ गोदावरी फूलको प्रतियोगात्मक प्रदर्शनी तथा मेला सुरु भएको छ । प्रदेश ३ सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले उद्घाटन गरेको उक्त मेला चार दिनसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ ।
सर्वसाधारणका लागि आजबाट माथिल्लो तामाकोशीको सेयर खुला
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशीको सेयर सर्वसाधारणका लागि आजदेखि खुला भएको छ । माथिल्लो तामाकोशीले तेस्रो चरणमा आजबाट सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन खुला गरेको हो ।
तेस्रो किस्ताको पर्खाइमा भूकम्पपीडित
लमजुङ । सरकारी ढिलासुस्ती, समन्वय अभाव, सीमित कर्मचारीका कारण दोस्रो वा तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएको दुई÷तीन महीनासम्म लाभग्राहीले रकम पाएका छैनन् ।
दाङ । दाङको लमही नगरपालिका–८ भैस्कोर्माका थारू समुदायका महिलाले सामूहिक रूपमा खोलेको दुना–टपरी उद्योग यतिखेर फस्टाउँदै गएको छ ।
विश्वका १४० देशसँग नेपालको व्यापारिक सम्बन्धः ११२ देशसँग घाटा, २८ देशसँग मात्रै नाफामा
काठमाडौं । विश्वका ११२ देशसँग नेपालको व्यापार घाटा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महीनाको विवरणमा विश्वका १४० देशमध्ये २८ देशसँग मात्रै नेपालको व्यापार नाफामा रहेको छ भने ११२ देशसँग घाटा रहेको छ ।
मादल बनाएर वर्षमा छ लाख आम्दानी
गोरखा । गोरखा नगरपालिका–१२ स्थित दशकिलोका कुलु समुदायले मादल बनाएर बिक्री गरी मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्। कुलु समुदायका चार घरपरिवारले मादल बनाएर बिक्री गरी प्रतिपरिवार वार्षिक सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन्।
समितिमा अध्यक्ष मदन खरेलले विमान खरिदको योजना सुनाए
काठमाडौं। सोमबार विहान नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष मदन खरेलले विमान खरिदको योजना सुनाए। ६ वटा नयाँ ट्विनअटर विमान किन्न सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव ल्याउन चाहेको उनले बताए।
तीन महिनामै साढे तीन खर्ब पुग्यो व्यापार घाटा
काठमाडौं । वैदेशिक मुलुकसँगको व्यापार घाटा चुलिने क्रमले यो तीन महिनामा पनि निरन्तरता पाएको छ ।
कपिलवस्तु । दशैंको आगमनसँगै मासुको माग समेत बढ्न थालेपछि कपिलवस्तुबाट दैनिक तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खसीबोका जिल्लाबाहिर निर्यात भइरहेको छ। घटस्थापनादेखि माग ह्वात्तै बढेपछि भारतीय खसीबोका व्यापारीहरुलाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ।
नेपाल खाद्य संस्थानले आजदेखि च्याङ्ग्रा र खसीबोका बिक्री गर्न थालेको छ ।
विराटनगर । मोरङका ठूला उद्योगी व्यवसायीले ५२ करोड १२ लाख रुपैयाँ कर तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
भोलिसम्म मुस्ताङबाट १ हजार वटा च्याङ्ग्रा काठमाडौं ल्याउने योजना बनाइएको
बाँकेमा एनआईसी एशिया बैंकको २ नयाँ शाखा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले २ नयाँ शाखा कार्यालयहरु संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले बाँकेको त्रिभुवन चोक र सम्झना चोकमा शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको हो ।
योसँगै मुलुकभर बैंकको कुला शाखा कार्यालय संख्या २ सय ६१ पुगेको छ। एटिएम, २ सय ५३ र एक्सटेन्सन काउण्टर २५ र शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई १८ वटा पुगेको बैंकले जनाएको छ ।
चिनीको मुल्य लेखाले तोक्यो ६३ मन्त्री भन्छन् ७०
काठमाडौँ । चिनीको बजार मूल्यको विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको छ । समितिले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद देखिएको हो ।
भद्रपुर भन्सार तीनदिनदेखि ठप्प
झापा । व्यापारीले अनावश्यक विवाद गरेपछि भद्रपुर भन्सार तीनदिनदेखि ठप्प छ ।
चिनीको मूल्य प्रतिकेजी रु ६३ कायम राख्न लेखा समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको मूल्य प्रतिकेजी रु ६३ कायम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अब होटल तथा रेस्टुरेन्टले मेनु मूल्यमा सेवा शुल्क र भ्याट जोड्न नपाउने
काठमाडौं । होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले मेनुमा लेखिएको खानाको मूल्यमा कर र सेवा शुल्क जोडेर लिन नपाउने भएका छन् ।
केन्द्रीय विलिङ प्रणालीमा पाँचतारे होटलको कारोबार
आन्तरिक राजस्व विभागले पाँचतारे होटलहरूको कारोबारलाई केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणलाी(सिबिएम)सँग जोडेको छ।
आयल निगमको घाटा अर्ब माथि
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मासिक घाटा बढेर रु एक अर्ब २९ करोड पुग्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण निगमको मासिक घाटा बढेको हो ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार बजार १८.०४ बिन्दुले घटेर एक हजार २३८.६७ पुगेको छ । आइतबार जस्तै आज पनि बजार दोहोरो मूल्यले ओरालो लागेको हो । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक समेत ४.२९ बिन्दुले घटेर २६२.८० बिन्दुमा पुगेको छ ।
दश अंकले ओर्लियो नेप्से
काठमाडौं । सेयर बजारको परिसूचक नेप्से १० अंकले झरेको छ।
आजको कारोबारपछि नेप्से १२५६ अंकमा कायम भएको छ। १६७ कम्पनीको ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो। बजारको पुँजीकरण १४ खर्ब ९६ अर्ब कायम भएको छ।
बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको इआइए सुरु
काठमाडौँ । छ लाख बढी सञ्चयकर्ताको लगानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण गर्न लागेको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को काम सुरु गरेको छ।
नेपाल र चीन ऊर्जा संयन्त्र बैठक बृहत कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने सहमति
काठमाडौँ । नेपाल र चीन ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सहजीकरण लागि बृहद् कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न सहमत भएका छन् । दुई देशबीच गठित ऊर्जा संयन्त्रको आजदेखि यहाँ शुरु भएको बैठकमा ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सहकार्य तथा लगानीका लागि सहजीकरण गर्न कार्ययोजना तयार पारेर लागू गर्ने सहमति भएको हो ।
डलरले बढायो रेमिट्यान्स,१ महिनामा ७३ अर्ब ९५ करोड पुग्यो
काठमाडौं । अमेरिकी डलर महंगो भएपछि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह ३३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत साउनमा ७३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिएको छ ।
२० अर्ब लगानी भएको डेरीले दैनिक ५० हजार लाख लिटर दूध उत्पादन, ३० हजारलाई रोजगारी
पाल्पा । डेरी उद्योगले नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई प्रत्यक्ष रोजागरी दिएको छ । नेपालका करीब पाँच लाख किसानले दूध उत्पादन गरी रोजगार र स्वजरोगार बन्दै गएका छन् ।
असोज २१ देखि दशैंका लागि नयाँ नोट, २७ हजारसम्म पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज २१ गतेदेखि दशैंका लागि नयाँ नोट सटही गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत वर्षको जस्तै १ जनालाई २७ हजार रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटही गर्न लागेको हो ।
फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर भएपछि नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्यबृद्धि गर्नु परेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
बजेट अभावले कार्यक्रम प्रभावित
पाँचथर । जिल्लामा अलैँची जोन कार्यक्रमका लागि बजेट अभाव भएको छ ।
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा पछिल्ला दिनमा उत्साहको सञ्चार भएको छ । यस साताको कारोवारको पहिलो दिन आज शेयर बजार दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ ।
चितवन । अण्डाको मूल्य बढ्न थालेपछि कृषकलाई राहत मिलेको छ । एक वर्षयता अण्डाको मूल्य बढ्न सकेको थिएन ।
म्याग्दी । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र भएर बग्ने कालीगण्डकी ‘उर्जा नदी’ मा रुपान्तरण हुँदैछ ।
बाँके । व्यावसायिक रूपमा हुँदै आएको कपासखेती पछिल्लो समय उजाड अवस्थामा पुगेको छ । कपासको व्यावसायिक उत्पादन घट्न थालेसँगै कपासखेती उजाडजस्तै अवस्थामा रहेको हो ।
पर्वत । यहाँका किसान माछापालनतर्फ आकर्षित भएका छन् । पर्याप्त आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसान त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपालमा लगानी गर्न भियतनामलाई आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौँ । लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज भने थामिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ६.७७ बिन्दुले बढेर एक हजार २१७.६५ बिन्दुमा पुगेको छ ।
वीरगञ्ज । दुई वर्षअघि प्रदेश नं २ को बारामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत माछा सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएपछि यहाँका किसान माछापालनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् ।
दाङ । पछिल्लो समय दाङमा सुविधासम्पन्न पसल९सुपरमार्केट० खुल्ने क्रम बढेको छ । एउटै छातामुनि सम्पूर्ण दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी सुपरमार्केट सञ्चालन भएका छन् ।
शेयर बजार नौ अङ्कले बढ्यो
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन आज शेयर बजारमा सुखद शुरुवात भएको छ ।
अदुवा निकासीमा कर
भद्रपुर । इलाममा उत्पादन भएको अदुवामा झापाले निकासी कर लगाउन थालेको छ ।
अमेरिका र मेक्सिको बीचको व्यापार वार्ता सहमति नजिक
वासिङ्टन । उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नाफ्टालाई अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी संयुक्तराज्य अमेरिका र मेक्सिकोका मध्यस्थकर्ताको वार्ता सोमबार पुनः आरम्भ गर्ने तयारी थालिएको छ । वासिङ्टनमा दुबै पक्षबीच साताभर चलेको अनौपचारिक वार्तामा व्यापार र लगानीका विषयमा व्यापक छलफल भएको र दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ । निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार साताको पहिलो दिन आज पनि घटेको छ ।
काठमाडौँ । कुखुरापालन किसानका लागि भरपर्दो पेसा हो । तर, यही पेसा सञ्चालनका लागि झण्डै रु १६ अर्बको कच्चा पदार्थ अन्यत्रबाट आयात गर्नुपर्छ । जबकी कुखुरापालन व्यवसायबाट वार्षिक रु ३३ अर्ब ७२ करोड आम्दानी हुन्छ ।
भद्रपुर । सीप र जागर भयो भने सानो लगानीले स्वदेशमै मासिक रु एक लाखदेखि दुई लाखसम्म कमाउन सकिन्छ, भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल हुनुभएको छ, झापा अर्जुनधारा–९ का उद्यमी दिनानाथ शिवाकोटी ।
बुटवल । सुनको अभाव भएको भन्दै सुनचाँदी व्यसायीले रुपन्देहीमा आज पसल बन्द गरेका छन् ।
विभिन्न पर्व नजिकिन लाग्दा उनीहरुले सुन पर्याप्त आपूर्ति नभएको भन्दै पसल बन्द गरेका हुन् । सुनचाँदीको वितरण प्रणाली वैज्ञानिक नभएको रुपन्देही सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष एमबी विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँले २०६८ सालमा जारी भएको सुन वितरणको नीति अहिले परिवर्तन नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिरहेको भए पनि शेयर बजारलाई त्यसले कुनै प्रभाव पारेको छैन ।
काठमाडौं। बजारमा सुन तोकिएको मूल्यभन्दा प्रतितोला तीन हजारदेखि तीन हजार दुई सय रुपैयाँसम्म बढीमा किनबेच भइरहेको पाइएको छ ।
काठमाडौं । अर्थ समितिले तरलता व्यवस्थापनको योजना ७ दिनभित्र बुझाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबारको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या आउन नदिन राष्ट्र बैंकसँग योजना मागेको हो ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ आगामि तीन वर्षमा सम्पन्न
काठमाडौँ । नुवाकोटमा आयोजनास्थल रहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
कारोबार रकम बढे पनि शेयर बजारमा गिरावट
काठमाडौँ । शेयर बजारमा आज दोहोरो अङ्कले गिरावट भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार नेप्से परिसूचक १४.०३ बिन्दुले ओरालो लागेर एक हजार १९६.२९ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक समेत २.८५ बिन्दुले ओरालो लागेर २५२.५३ बिन्दुमा पुगेको छ । आज कूल १६० कम्पनीको १५ लाख ६४ हजार ६९२ कित्ता शेयर रु ३२ करोड ५२ लाख ३४ हजार ७११ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ ।
बाँके । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (बिबिडिएमपी)को सुरुङमार्ग निर्माण तोकिएकै अवधिमा सम्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ ।
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा केही कम्पनीका शेयर आधारभूत मूल्यको आसपासमा रहँदा जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीका शेयर घटे पनि बजारको शाख राखिरहेको छ ।
काठमाडौँ । शेयर बजारमा आज सामान्य गिरावट आएको छ ।
शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज २।५६ बिन्दुले घटेर एक हजार १९१।३१ बिन्दुमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०।४१ बिन्दुले घटेर २५१।१५ बिन्दुमा पुगेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पासबाट १९ अर्ब ३२ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले गएको आवका संकलन गरेको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा करिब पाँच प्रतिशतले बढी हो ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘बीमा विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं । लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १२।८४ बिन्दुले बढेर एक हजार १९४ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोवारको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत २।४६ बिन्दुले बढेर २५१।३२ बिन्दुमा पुगेको छ ।
साउन १ देखि अनलाइन शेयर कारोबार परीक्षण हुने
काठमाडौं । पूर्ण स्वचालित अनलाइन शेयर कारोबार प्रणालीको मंगलबार (साउन १) देखि परीक्षण कारोबार सुरु हुने भएको छ ।
आज दिउँसो २ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने
काठमाडौं। र्याडिसन होटलबाट आज नेपाल राष्ट्र बैंकले दिउँसो २ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीति पारित गरिसकेकाले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागिएको हो।
गरिबी निवारणका लागि नुवाकोटमा दश करोड लगानी
नुवाकोट। गरिबी निवारण कोषमार्फत नुवाकोटमा करीब रु १० करोड लगानी भएको छ ।
मेरोसेयरको नक्कली मोबाइल एप डाउनलोड नगर्न आग्रह
काठमाडौं । केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीले विकास गरेको सेयर सम्बन्धि अनलाइन सफ्टवेयर मेरो सेयरको अहिलेसम्म मोबाइल एप निर्माण भएको छैन ।
रोजगार मेला शुरु
बुटवल । रोजगारदाता र कामको खोजीमा रहेकाहरुबीचको सम्पर्क स्थापित गर्ने उद्देश्यले बुटवलमा रोजगार मेला शुरु भएको छ । मेलाको प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले उद्घाटन गरे ।
१४० मेगावटको तनहुँ हाइड्रोको पीपीए सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)मा हस्ताक्षर भएको छ ।
लगानीकर्ता कारोबारसँग तर्सिदाँ परिसूचक घट्योः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेयर बजारका लगानीकर्ता कारोबारसँग तर्सिदाँ नेप्से परिसूचक घट्ने गरेको बताएका छन् ।
राजधानीका चार ‘स्मार्ट सिटी’को डीपीआर धमाधम हुँदै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको चार कुनामा नयाँ शहर निर्माण गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) धमाधम निर्माण भैरहेको छ ।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष सुरु हुने बित्तिकै कार्यान्वयन चरणमा लैजाने भन्दै घोषणा गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र र सामूहिक धितोमा ऋण लिन युवाहरुले कम्तिमा अझै तीन महिना कुर्नुपर्ने भएको छ।
काठमाडौं । उखु किसानको पैसा समयमा भुक्तान नगरेको भन्दै सरकारले ४ जना चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्न ३ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल बैंकले एक करोड ७६ लाख कित्ता थप नयाँ साधारण शेयर अर्थात एफपीओ असार १५ गतेदेखि बिक्री गर्ने भएको छ ।
जेठमा ७३ कम्पनीको विदेशी लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । उद्योग विभागले जेठ महिनामा मात्रै ७३ वटा कम्पनीको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
काठमाडौं । विभिन्न ११ कम्पनीको सात अर्ब ५४ करोड ७० लाख २४ हजार ८१ रुपैयाँ मूल्य बराबरको ७५ करोड ४७ लाख २४० कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासनको तयारी गरिएको छ ।
चितवन । नेपालमा रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । पूर्व–पश्चिम, केरुङ–काठमाडौँ, वीरगञ्ज–काठमाडौँ र भारतीय सीमाका पाँच ठाउँमा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी रेल निर्माण प्रक्रियालाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाइएको हो ।
काठमाडौं । ३२ मेगावाट जडित क्षमताको कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत केन्द्रको एउटा युनिट (१६ मेगावाट) को जेनेरेटरमा समस्या देखिएको छ ।
सरकार र लगानीकर्ताको वार्तापछि खुल्यो सेयर कारोबार
काठमाडौं । सरकारले बोनस र हकप्रद सेयरमा पुरानै विधिबाट पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने निर्णय गरेपछि शेयर लगानीकर्ताले आन्दोलन फिर्ता लिएर शेयर कारोबारमा सहभागी भएका छन् ।
ठूला योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण मन्त्रालय र विभागहरु उच्च अधिकारीहरुलाई ठूला योजनाहरु ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने उद्घोष
हेटौंडा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेटौंडाको कपडा कारखाना सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न कतारसँग उद्योगमन्त्री यादवको आग्रह
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्न कतारसँग आग्रह गरेका छन् ।
क्यासिनो कारोबार बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यासिनोहरुलाई विदेशी विनिमय कारोबार बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चक्रपथमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनको चाइना रेलवे २५ व्युरो ग्रुप कम्पनीलार्इ जिम्मा दिएको छ । शुक्रबार महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र चाइना रेलवेका महाप्रवन्धक लि होङगकीले सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखामा चिनियाँ प्राविधिकहरुले केरुङ–काठमाडौं रेल परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनका गरिरहेका छन्।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार अपराह्न संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
नेपाली र जापानबिच विपद् व्यवस्थापनका लागि अनुदान सहायतमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । जापानले नेपालको विपद् व्यवस्थापनका लागि ६८ करोड ३२ लाख अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको छ ।
विदेश जाने घटेपछि रेमिट्यान्ट पनि घट्यो
काठमाडौं । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा पनि गिरावट देखिन थालेको छ ।
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गलत तरिकाले लगानी गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गरिरहेको बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रका कम्पनी अब पूँजी बजारको दायरामा : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्बौं नाफा कमाउने निजी क्षेत्रका कम्पनी अब पूँजी बजारको दायरा बाहिर रहन नसन्ने बताएका छन् ।
चितवनमा २० करोडको केरा सखाप
चितवन । हावाहुरी र असिनापानीका कारण पूर्वी चितवनको विभिन्न क्षेत्रमा रु २० करोडभन्दा बढीको केरा सखाप भएको छ ।
बुटवल पावर र साझेदार कम्पनीले दुर्इ विद्युत आयोजना किन्यो
काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षमा थप एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बुटबल पावर कम्पनीले साझेदार कम्पनीसँग मिलेर ८८२ मेगावाट क्षमताको दुई जलविद्युत्त आयोजनाको सम्पूर्ण सेयर किनेका छन् ।
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावरको दशौं वार्षिक साधारण सभा जेठ १४ गते हुने भएको छ ।
फाष्ट ट्रयाकको डीपीआर बनाउन १७ कम्पनी इच्छुक
काठमाडौं । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन १७ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । नेपाली सेना मागेको आशयपत्रमा १७ कम्पनीले आवेदन गरेका हुन् ।
यातायात व्यावसायी सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारसँग वार्ता गर्न तयार
काठमाडौं । गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठन तथा नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनले आज आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले यातायात क्षेत्रमा सरकारले गरेको सिण्डिकेट अन्त्यको प्रयासमा आफूहरुको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको बताएका छन् ।
अवकाशपछिको समय स्वोरोजगारी र उद्यमशीलतामा लगाउन अर्थमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा स्वरोजगारी र उद्यमशीलताका यथेष्ट कार्यक्रम ल्याउने खुलासा गरेका छन् ।
आजदेखि पाँच सय रुपैयाँका नयाँ नोट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैशाख १२ गते देखि पाँच सयको नोटमा केहि परिवर्तन गरेर चलनचल्तिमा ल्याएको छ ।
अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब, आर्थिक बृद्धि ६ प्रतिशत मुस्किल : तथ्यांक विभाग
काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धि दर ५.८९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन सरकारले मध्यावधि समीक्षा मार्फत तय गरेको लक्ष्य भन्दा शुन्य दशमलव ११ प्रतिशत कम हो ।
प्रदेश २ को सरकारले ल्यायो नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट
जनकपुर । प्रदेश २ को सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनाका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
भैरहवामा ‘आधुनिक लकिङ’ प्रणाली
काठमाडौं । भारतीय आयल कर्पोरेशन वेहलपुर डिपोबाट नेपाल आयल निगमको भैरहवा डिपोमा इन्धन बोक्ने ट्यांकरमा आधुनिक लकिङ प्रणाली सुरु भएको छ ।
रेलवे र सुरुङ इन्जिनियरिङ अध्ययन नेपाली चीन जाने
काठमाडौं । चीन सरकारले नेपाली नागरिकलाई रेलवे इन्जिनियरिङदेखि पुल र सुरुङ इन्जिनियरिङसम्म अध्ययनका लागि कोटा उपलब्ध गराएको छ।
अब दुई अर्बसम्मका उद्योग दर्ता प्रदेशबाट हुने
काठमाडौं । देशमा संघीयतामा गएसँगै संघीय सरकारले दुई अर्बभन्दा कम पुँजी भएका उद्योगलाई प्रदेशमा दर्ता गराउने प्रक्रिया मिलाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
काठमाडौं । युवा स्वरोजगार कोषले युवालाई उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिव्यक्ति रु पाँच लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्ने भएको छ ।
पाँचथर । पूर्वी पहाडलाई तराई र काठमाडौँसँग जोड्ने दु्रत सडक मार्गको रुपमा लिइएको ‘कोशी करिडोर’को काम अघि बढेको छ।
म्याग्दी भ्रमण वर्ष २०७५ को तयारी तीब्र
म्याग्दी । उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा आगामी नयाँ वर्ष २०७५ लाई ‘म्याग्दी भ्रमण वर्ष’को रुपमा मनाउने तयारी गरिएको छ । सरोकारवालाहरुको सहयोग र सहकार्यमा आगामी वैशाख १ गतेदेखि म्याग्दी भ्रमण वर्ष मनाउन लागिएको हो ।
श्वेतपत्र दलविशेष नभई अर्थतन्त्रको यथार्थ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको श्वेतपत्र कुनै दलविशेषमा लक्षित नभई वस्तुस्थितिको समीक्षामा केन्द्रित गरिएको यथार्थ तस्वीर रहेको बताउनुभएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडा संसदमा विशेष सम्बोधन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र भबिष्यमा चाल्नुपर्ने रणनीतिसहितको श्वेतपत्र संसदमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट आयात गर्न १५ महिनाको नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।
शिवम् सिमेन्टले ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँको आईपिओ निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले जारी पूँजीको १२ प्रतिशत साधारण सेयर (आईपिओ) विक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले स्थानीय वासीन्दाका लागि २ प्रतिशत तथा सर्वसाधारणका लागि १० प्रतिशत आइपिओ विक्री गर्न लागेको हो ।
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री बर्षमान पुनले आर्थिक सम्वृद्धिका लागि ऊर्जा प्रमुख आधारस्तम्भ भएको बताएका छन् ।
आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्रै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुने बताएका छन् । सरकारले आर्थिक विकासको योजनालाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको सबै प्रयासले मात्रै मुलुक अगाडि नबढ्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्ने उल्लेख गरे ।
प्लास्टिकबाट इन्धन उत्पादन
झापा । कन्काई नगरपालिकास्थित सुरुंगामा प्लास्टिकबाट इन्धन उत्पादन गरिएको छ । सुरुंगामा आयोजित एक कार्याशाला गोष्ठीमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)ले प्लास्टिकबाट इन्धन उत्पादन गरेर देखाएको हो ।
पहिलो पटक रोबोटबाट चल्ने सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन हुने
हेटौंडा । पहिलो पटक हेटौंडामा रोबोटबाट सञ्चालन हुने ठूलो सिमेन्ट उद्योगले परीक्षण उत्पादन गर्ने तयारीमा छ ।
२७ बैंकद्वारा एनआईसी एसियासँगको कारोबारमा रोक
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय बाहिर गएर बैंकिंग प्रणालीलाई असहज बनाउन खोजेको भन्दै संघले एनआईसी एशिया बैंकसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई तत्काल स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२० देशका वैज्ञानिक सौराहामा
चितवन । अन्तर्राष्ट्रिय केमिकल वैज्ञानिक सम्मेलन आजदेखि सौराहामा शुरु हुँदैछ । सम्मेलनमा २० देशका १०० जना वैज्ञानिक सहभागी हुने बताइएको छ ।
बजेट मध्यावधि समिक्षामार्फत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य घट्यो, आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६% ले मात्र आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याँउछु : मन्त्री यादव
जनकपुर । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बन्द उद्योग तथा कलकारखाना पुनःसञ्चालनमा ल्याउनका लागि पहल गर्ने बताएका छन् ।
उनन्तीस हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा
काठमाडौं । मुलुकको कूल जलविद्युत् क्षमतामध्ये २८ हजार ८२३ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणका चरणमा रहेका छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालको जलविद्युत्को क्षमता ८२ हजार ८०० मेगावाट रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका ८ संचालक पक्राउ
काठमाडौं । कानून विपरित वित्तीय कारोबार गर्ने इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका आठ जना संचालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको टोलीले सुनसरी र मोरङमा अवैध रुपमा संचालन गर्ने कम्पनीका संचालकलाई पक्राउ गरेको हो।
मुलुक निर्माणको दशक घोषणा गर्न सरकारसँग महासंघको माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वि।सं। २०७५–२०८५ लाई मुलुक निर्माणको दशकको रुपमा घोषणा गर्न माग गरेको छ । महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी १२ बुँदामा सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा सार्वजनिक गर्दै आगामी २०७५ सालदेखि २०८५ सालसम्मलाई मुलुक निर्माणको दशकको रुपमा घोषणा गर्न माग गरेको हो ।
चमेलियाबाट विद्युत उत्पादन शुरु, शनिवार उद्घाटन हुने
काठमाडौं । सरकारी लगानीबाट निर्माण भएको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाले एक महिना बढी समय लगाएर दुई युनिटको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेपछि शनिबारदेखि नियमित व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्नेछ ।
आयल निगम पनि अब व्यावसायीक हुने
काठमाडौं । सरकारले इन्धन कारोबारमा एकाधिकार प्राप्त नेपाल आयल निगमको संरचना परिवर्तन गर्ने भएको छ । परम्परागत ढाँचामा सेवा विस्तार गर्दै आएको निगमको संरचना परिवर्तन गरी समसामयिक बनाउन लागिएको सरकारले जनाएको छ ।
नेपाल बैंकले एफपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंकले चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने भन्दै प्रिमियम मूल्यमा एक करोड ७६ लाख ८४ हजार ८ सय ५८ कित्ता थप नयाँ साधारण सेयर अर्थात एफपीओ बिक्री गर्ने प्रस्ताब सार्वजनिक गरेको छ ।
विदेश गएका नेपालीहरुले आकर्षक ब्याजमा राष्ट्र बैंकको बचत पत्र खरिद गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रोजगारीको सिलसिलामा बिदेश गएका नेपाली र उनीहरुका परिवारलाई आकर्षक लाभ दिने गरी बचत पत्र बिक्री गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपालीहरु तथा गैरआवासिय नेपालीहरुका लागि २५ करोड रुपैयाँको ५ बर्षे अबधिको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ।
काठमाडौँ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि दुई अर्ब ६३ करोड ८५ लाख बराबरको साधारण शेयर (आइपिओ) जारी गर्ने भएको छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा भारतले सघाउने
काठमाडौं । भारतले नेपालको दु्रत आर्थिक उन्नयन र समग्र विकासका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकतानुरुप पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बताएको छ ।
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग विश्व बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत क्रिस्टालिना जिओर्भिइभाले भेट गरी नेपालको आर्थिक विकासका लागि आफूहरु थप सहयोग गर्न तयार रहेको बताएकी छिन् ।
सरकारी ढुकुटीको पैसा वाणिज्य बैंकहरुमा राख्ने तयारी
काठमाडौं । लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले दीर्घकालीन उपाय खोज्न थालेको छ। यसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खाताको पैसा निजी बैंकमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
तेलको मूल्य फेरी बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मुल्य बढाएको हो।
सय र हजार रुपैयाँको सिक्का राष्ट्र बैंकले निकाल्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्रिचन्द्र कलेज १०० वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा विशेष सिक्का बजारमा ल्याउने भएको छ। मुलुककै पुरानो कलेज १०० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा त्रिचन्द्र क्याम्पस प्रशासनले राष्ट्र बैंकलाई सिक्काका लागि अनुरोध गरेको थियो।
‘फास्ट ट्रयाक निर्माणको कार्यप्रगति सन्तोषजनक’
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं । तातोपानी नाका खोल्न सुरक्षाको प्रत्याभूति भए चिनियाँ पक्षले छिट्टै नाका खोल्ने भएकोे छ । सुरक्षाका विषयमा चिनियाँ पक्षले बढ्ता चासो राखेको र नेपालले सो सम्बन्धमा आवश्यक विश्वास दिलाउनुपर्ने देखिएको छ।
सरकारले १२ सय पुल मर्मत गर्नका लागि तथ्यांकनै भेटेन
काठमाडौँ । विभिन्न विदेशी कम्पनीले निर्माण गरेका नेपालका साना ठूला गरी एक हजार २०० भन्दा बढी पुलको तथ्यांक नै नरहेको पाइएको छ ।
चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले माघ ६ देखि उत्पादन थाल्ने
काठमाडौं । ३० मेगावाटको चमेलिया जलबिद्युत आयोजनाले माघ ६ गते शुक्रबारदेखि विद्युत उत्पादन थाल्ने भएको छ । नियमित उत्पादन माघको ६ गतेबाट थाल्ने भएपनि शुक्रबार यसबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडने भएको छ ।
एनसेललाई लाभांस लैजान स्वीकृति
काठमाडौं । एनसेलका विदेशी साझेदार रेनल्ड होल्डिङसलाई लाभांस लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ। विदेशी विनिमय विभागसमेत हेर्ने डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको तहबाट लाभांस विदेश लैजान स्वीकृत दिइएको हो।
नेपाल निर्यात परिषदमा पुन: सुरेन्द्रकुमार क्षेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल निर्यात परिषद्को अध्यक्षमा सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । परिषदको २० औँ वार्षिक साधरणसभाबाट श्रेष्ठ पुनः निर्वाचित भएका हुन्।
सिभिल बैंकका कर्मचारी ४० लाख रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोपमा पक्राउ
काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले झण्डै ४० लाख रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोपमा सिभिल बैंकका एक कर्मचारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । स्रोतका अनुसार सिभिल बैंकको बौद्ध शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले उक्त रकम हिनामिना गरेका हुन् ।
ग्यासको कमिशन बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग ग्यास बिक्रेताको माग
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका प्रतिनिधीलाई कमिशन बढाउने आश्वासन दिएका छन्। देउवाले मन्त्रिपरिषबाटै निर्णय गराएर कमिशन बढाउने आश्वासन दिएका हुन्।
भीमदत्तनगर । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लामो समयदेखि वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आइरहेको छ । केही वर्षयताको राजस्व संकलन तथ्यांक हेर्दा वार्षिकरुपमा लक्ष्यभन्दा पाँचदेखि २१ प्रतिशतसम्म बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न प्रोटोकल तयार
काठमाडौं । नेपालले चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने विषयमा भएको सम्झौताअनुसार प्रोटोकल तयार भएको छ । नेपालले प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएर चीन पठाएको छ । चीनले अन्तिम रूप दिएपछि नेपालको भारतसँगको परनिर्भरता सदाका लागि हट्नेछ। वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे नेपालका तर्फबाट प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले अन्तिमरूप दिएर चीन पठाएका छौं ।
फूलबारी रिसोर्टले सरकारलार्इ तीन अर्ब रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पोखराको दी फूलबारी रिसोर्ट प्रालिलाई राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर छुट दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले दुई अर्ब ३१ करोड लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुककुटीमा रहेको रकम विभिन्न बैंकहरुमा मुद्दती निक्षेपका रुपमा राख्न सूचना प्रकाशित गरेको छ । आइतबार जारी गरेको सूचनामा राष्ट्र बैंकको विभिन्न कोषमा रहेको रकम १ वर्षे मुद्दतीमा राख्न विभिन्न बैंकहरुलाई निवेदन दिन आव्हान गरेको हो । राष्ट्र बैंकले २ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ ।
पाँच अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले आज बित्त बजारमा पठाउँदै
काठमाडौं । बित्त बजारमा तरलता अभाव चर्किएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आईतबार पाँच अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा पठाउँदै छ ।
दमकमा रु तीन खर्ब ३३ अर्बको लगानीमा औद्योगिक उद्यान बन्ने
दमक। झापाको दमकमा निर्माण हुने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको चीनको ल्हासास्थित आर्थिक तथा प्राविधिक विकास क्षेत्रका अधिकारीको एक टोलीले आज स्थलगत अवलोकन गरेको छ ।
तीन महिनाको लागि नेपाल र भारतबीच विद्युत् नवीकरण सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रशारण लाइनबाट आयात हुने विजुलीको विद्युत खरिद सम्झौता तीन महिनाको लागि नविकरण गरेको छ।
उच्चस्तरीय टोलीसहित घिसिङ दिल्ली प्रस्थान
बैंकमा तरलता अभाव, कर्जा रोक्ने तयारी
काठमाडौं । तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले कर्जा रोक्ने तयारी गरेका छन्। तरलता अभाव थप चर्कंन नदिन कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बैंकरले बताएका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले तत्कालका लागि कर्जा रोक्नुको विकल्प नभएको बताए।
विद्युत प्राधिकरणले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार ल्याउन कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने ग्राहक तथा वितरण सेवाका (डीसीएस) कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरेको हो ।
चिनियाँ नाकाको अवलोकनका क्रममा ओली भने अब देशमा तिब्र आर्थिक विकास
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चिनियाँ नाकाको अवलोकनका लागि रसुवाको टिमुरे पुगेका छन्। महासचिव ईश्वर पोखरेल, पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य शकर पोखरेल, सुवास नेवाङलगाएतका नेतालाई साथमा लिएर अध्यक्ष ओली टिमुरे पुगेका हुन्।
चोभार सुख्खा बन्दरगाहको लागि डीपीआर तयार
काठमाडौं । चोभारमा निर्माण हुने अन्तराष्ट्रिय स्तरको सुक्खा बन्दरगाह र प्रदर्शनीस्थलको गुरुयोजना र डीपीआर (विस्तृत परियोजना) तयार भएको छ।
शिवम् सिमेन्टले ३७ करोडको आइपीओ निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टस लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई ३७ करोड बराबरको ३७ लाख कित्ता सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले पुस २५ गते बोलाएको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा आइपीओ निष्कासनको विशेष प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ ।
त्रिशुली–रसुवागढी सडक दैनिक ८ घण्टा बन्द हुने
काठमाडौं । गल्छी–त्रिशुली–रसुवागढी सडकखण्ड आजदेखि दैनिक ८ घण्टा बन्द हुने भएको छ। तीन महिनासम्म दैनिक बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म र बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म गल्छी–पिपलटार सडक बन्द हुने भएको छ ।
नेपालले चीनसँग बनाउने विकास परियोजनाको प्रस्ताव तयार
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी विकासका प्रस्ताव संकलन गरेको छ ।
सेयर बजारका विशेषज्ञहरुको खोजीमा नेप्से
काठमाडौँ । विज्ञहरुको रोष्टरका लागि नेप्सेले सूचना निकालेको छ । नेप्सेले आफ्नो सेवालार्इ परिस्कृत गरेर आधुनिक बनाउन विज्ञहरुको सूची तयार पार्न लागेको नेप्सेका महाप्रवन्धक चन्द्रसिंह साउँदले बताए । विधागत रुपमा विज्ञको सूची तयार पारेर परामर्श लिने उनले बताए।
भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरू ७२ घण्टाका लागि बन्द
काठमाडौं । आगामी मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आज बिहानदेखि नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएका मोरङका सीमा नाका सिल गरिएको छ। यही बिहीबार हुने निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले भारतसँग जोडिएको मोरङको ४२ किलोमिटर सीमा नाकालाई सिल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
दूध उद्योगमा आगलागी हुँदा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढिको क्षति
इलाम । सूर्योदय नगरपालिका–६ हर्कटेस्थित दुग्ध उद्योगमा आगलागी हुँदा एक करोडभन्दा बढीको धनमालको क्षति भएको छ।
एडीबीले नगरको पूर्वाधार विकास गर्न दियो १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण
काठमाडौं । एशियाली विकास बैंकले क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु १५ अर्ब ४० करोड ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र उक्त बैंकका देशीय निर्देशक मोख्तर खामुदखानोभले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अब स्वदेशी लगानीमा बन्ने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गने निर्णय गरेको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिने भएको हो ।
१९ वर्षमा १ करोड २९ लाख यात्रु मनकामना केबलकार चढे
काठमाडौं । नेपालको पहिलो केबलकार मनकामना केबलकारमा १९ वर्षको अवधिमा १ करोड २९ लाख जना यात्रु चढेका छन् ।
काठमाडौं । दार्चुलाको बलाँचदेखि कैलालीको अत्तरिया सवस्टेसन जोड्ने १३२ केभीे प्रसारण लाइनमा आजदेखि विद्युत् प्रवाह भएको आयोजनाले जनाएको छ । सन् २००७ देखि निर्माण कार्य शुरु भएको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना झण्डै १० वर्षपछि आजदेखि प्रसारण शुरु भएको आयोजना प्रमुख अजय दाहालले जानकारी दिए ।
नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा बढेर ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार उकालो लाग्दै गए पनि सोही अनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा निगमको घाटा बढ्दै गएको हो ।
दक्षिण एसियाली देशबीच लगानी र व्यापारको अन्तर्देशीय आर्थिक एजेन्डामा जोड
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली आर्थिक शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा शुरु भएको छ । दक्षिण एसियाली देशबीच लगानी, व्यापारलगायत अन्तर्देशीय आर्थिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ १० औं शिखर सम्मेलनमा उठान गरिएको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक नेपालकै नमुना बन्ने
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकलाई नेपालकै नमुना बनाउन लागिएको छ । नेपालमा बनेका सडकमध्ये गुणस्तरीयतामा अहिलेसम्मकै नमुना बनाउन लागिएको छ । विश्व बैंकको अनुदानमा निर्माण भइरहेको यो सडक विभिन्न चरण गरी ६१ सेन्टिमिटर मोटाइको बन्नेछ । तीन चरणको ग्राभेल र दुई चरणको कालोपत्रे गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सडक निर्माण भइरहेको छ । सुरुवातमा बाटोको आकार निकालेपछि त्यसमा २० सेन्टिमिटर ग्राभेल राखेर सव बेस बनाइएको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवा कम्पनीले नपाउने
काठमाडौं । सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स चिनियाँ गेजुवा कम्पनी (सिजिजिसी)बाट खोसेको छ।
तरकारीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन
नेपाल र चीन जोड्ने रेलमार्ग सम्भव : चिनियाँ टोली
काठमाडौं । नेपाल र चीन जोड्ने रेलमार्गबारे अध्ययन गर्न नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले रेल निर्माण प्राविधिक रुपमा सम्भव भएको निष्कर्ष दिएको छ । केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग सम्भव रहेको प्रारम्भीक रिपोर्ट उक्त टोलीले दिएको हो । चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री चेङ जियान नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोली सम्भाव्यता अध्ययन गरेर शुक्रबार बेइजिङ फर्केको छ । उक्त टोलीले आफ्नो रिपोर्ट चीन सरकारलाई पेश गर्नेछ ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको लागि जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु
काठमाडौं । आगमी सात वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको नागढुङगा नौविसे सुरुङमार्गको सडक निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । आयोजनाले सुरुङमार्गमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको सूचना बुधबार प्रकाशित गरेको छ। एक महिनाभित्र मुआब्जा दाबीका लागि कागजात पेश गर्न पनि आयोजनाले सूचित गरेको छ।
विद्युत चोरी गर्ने ५८ जनामाथि कारबाही
राजविराज । नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र राजविराजले विद्युत चोरी गर्ने ५८ जनामाथि कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख चन्द्रनारायण साहले दिनुभएको जानकारीअनुसार २०७४ साउनदेखि हालसम्म जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा गरिएको छड्के अनुगमन तथा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत रु तीन लाख ३१ हजार ७५६ राजश्व असुली समेत गरेको छ ।
लमजुङमा १७ किलो सुनसहित एक व्यक्ति पक्राउ
लमजुङ । प्रहरीले १७ किलो सुनसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । मनाङबाट बा ५४ प ४२९१ नम्बरको मोटरसाइकलमा बेसीशहरतर्फ जाँदै गरेका पासाङ लामाका साथबाट सुनका १७ वटा विस्कुट प्रहरीले बरामद गरेको हो ।
दरबारमार्ग र न्यूरोडका ग्राहक ठग्ने आठ ब्राण्डेड पसलका संचालक पक्राउ
काठमाडौं। दरबारमार्ग र न्यूरोडका ८ ब्राण्डेड पसलका सञ्चालकलाई महानगरीय प्रहरी परिसरले कालोवजारी ऐनअन्तर्गत कार्वाहीका लागि पक्राउ गरेको छ।